Forex ဝေါဟာရ | FXCC
တစ်ဦး FXCC အကောင့်ထုတ်ပြန်ချက်အစီရင်ခံစာအချိန်တစ်ကာလအတွင်းကုန်သွယ်မှုအကောင့်ထဲမှာကိုဖန်ဆင်းသမျှသောအရောင်းအပြသထားတယ်။ ဥပမာ; client ကိုကြာတိုင်းကုန်သွယ်ရေး (အမိန့်) / တစ်ဦးချင်းစီအမိန့်၏ကုန်ကျစရိတ်, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အချိန်မရွေးအကောင့်လက်ကျန်ငွေနှင့်လှိမ့ချိန်ခွင်လျှာအကောင့်အပေါ်တစ်ခုချင်းစီကိုအရေးယူဘို့မှတ်ပြီးနောက်, စျေးကွက်သို့ဝင်သော။
အကောင့် Value ကို
အတူတူစွဲချက်တွေနဲ့နေ့စဉ် rollOver ထံမှတည်ဆဲနှင့်ပိတ်ထားသောရာထူး, ခရက်ဒစ်နှင့်ဒက်ဘစ်ကနေအမြတ်အစွန်းနှင့်ဆုံးရှုံးမှု: တစ်ဦးကို client ရဲ့အကောင့်လက်ရှိတန်ဖိုးကဒီစုစုပေါင်းရှယ်ယာ (/ အကောင့်အတွက်ကျန်ရှိငွေအသားတင်ပိုက်ဆံပမာဏ) နှင့်ကြောင့်မှမဆိုအပြောင်းအလဲများကိုလည်းပါဝင်သည် လှုပ်ရှားမှုကနေကဲ့သို့သော: ကော်မရှင်, လွှဲပြောင်းအခကြေးငွေ, ဒါမှမဟုတ်ဘဏ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖိုးအခ, ထိုကဲ့သို့သောအခကြေးငွေ aplicable လျှင်။
ဗဟိုဘဏ်တွေကမွေးစားတစ်ဦးငွေလဲနှုန်းမူဝါဒမှာ။ အဆိုပါအမျိုးသားရေးငွေကြေးကိုအဓိကငွေကြေး (ထိုကဲ့သို့သောအမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်ယူရိုအဖြစ်အားကောင်းငွေကြေးကို) မှ (fixed) "pegged" ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီကဥပမာယူရိုဖို့ဆွစ်ဖရန့်၏တံစို့ဖြစ်ခြင်း။ အဆိုပါတံစို့ယေဘုယျအားဖြင့်ပို့ကုန်ဈေးကွက်တွင်နိုင်ငံ၏ယှဉ်ပြိုင်အနေအထားမှတိုးတက်မှုများအဖြစ်, ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
ADX; ပျမ်းမျှအား directional အညွှန်းကိန်း
အဆိုပါပျမ်းမျှ Direct လပ်ြရြားမြညွှန်းကိန်း (ADX) တစ်ခုတည်းဦးတည်ချက်အတွက်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာအားဖြင့်လမ်းကြောင်းသစ်၏ခွန်အားတည်ထောင်ရန်တစ်ဦးကုန်သွယ်ညွှန်ပြချက်အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ အဆိုပါ ADX ဂျေ Welles Wilder အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေတိုက်ရိုက်လပ်ြရြားမြစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်တိုက်ရိုက်လပ်ြရြားမြအညွှန်းကိန်းကနေရရှိလာတဲ့ပျမ်းမျှဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက FXCC ဖောက်သည်သဘောတူညီချက်မှပြောပြတယ်။ client အားလုံးဖတ်ပါ, ပြီးတော့ FXCC နှင့်အတူအကောင့်တစ်ခုဖွင့်မီ, (အီလက်ထရောနစ်လိုအပ်ပါက) ကို FXCC ဖောက်သည်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏စည်းကမ်းချက်များကိုလက်ခံရပေမည်။
အဆိုပါ FXCC ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း။
Application Programming Interface - API ကို
ဒါဟာတခြားဆော့ဗ်ဝဲပရိုဂရမ်များနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်တဲ့မျက်နှာပြင်တခုဖြစ်တယ်။ Forex ကုန်သွယ်ရန်ရည်ညွှန်းနှင့်အတူတစ် API ကိုပု Forex စျေးကွက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ရန်ပလက်ဖောင်းအားဖွင့်, အင်တာဖေ့ကိုရည်ညွှန်းသည်။ အစစ်အမှန်အချိန် Forex စျေးနှုန်းကိုးကားနှင့်ကုန်သွယ်မှုအမိန့် / ကွပ်မျက်: APIs များကိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်ဝေမျှခြင်းခွင့်ပြုဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များ, ဆံ့။
စီးပွားရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနဲ့ သို့ဖြစ်. စျေးကွက်တုံ့ပြန်မှုတုံ့ပြန်တစ်ဦးကငွေကြေးရဲ့တန်ဖိုးကတိုး, ဒါမှမဟုတ်ကိုခိုင်ခံ့စေ။
ဒါဟာစျေးနှုန်းသို့မဟုတ် / နှင့်ငွေကြေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေအကျိုးရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူတစ်ဦး Forex ကုန်သည်များတစ်ပြိုင်နက်ရောင်းတူညီသော (သို့မဟုတ်ညီမျှ) ကိုဝယ်သည့်အခါအသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းဘဏ္ဍာရေးတူရိယာဖြစ်ပါတယ်။
ငွေကြေး, ဒါမှမဟုတ်တူရိယာ FXCC အားဖြင့်ရောင်းချခြင်း, သို့မဟုတ်အခြားတန်ပြန်ပါတီများအတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သောမှာစျေးနှုန်း။ သူ / သူမတစ်ဦးအနေအထားဝယ်ဖို့သို့မဟုတ်ရှည်လျားရန်ကြိုးစားနေချိန်တွင်အဆိုပါမေးဖို့သို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုစျေးနှုန်းထိရောက်စွာစျေးနှုန်းတစ် client ကိုကိုးကားပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါပျမ်းမျှစစ်မှန်သော Range (ATR) ညွှန်ပြချက်အကောင့်ထဲသို့ယခင်ကုန်သွယ်ကာလ၏အနီးကပ်ထံမှမည်သည့်ကွာဟချက်ယူလေ့လာရေးရဲ့ range ကိုအောကျကာလ၏အရွယ်အစားတိုင်းတာသည်။
အဆိုပါ AUD / အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေကြေးကို pair တစုံများအတွက်သင်္ကေတ / သက်တမ်းအသိအမှတ်ပြုတစ်ဦးကိုလက်ခံကုန်သည်နှင့်နိုင်ငံတကာတွင်။
ဤသူတစ်ဦးကို client ထောက်ပံ့ငွေကုန်သွယ်ခွင့်အာဏာတတိယပါတီဖြစ်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကို client ရဲ့အကောင့်ထိန်းချုပ်ပေးထားပါတယ်။ FXCC, ဆိုလိုခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်, ထောက်ခံသို့မဟုတ်အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်များ၏လည်ပတ်မှုနည်းလမ်းအတည်ပြုမပေးပါဘူး။ FXCC ထို့ကြောင့်အခွင့်အာဏာကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အကငျြ့မတာဝန်လက်ခံခဲ့သည်။
အော်တို - ထရေးဒင်း
ဤသည်ကိုမကြာခဏသူတို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းမှတဆင့်စျေးကွက်သို့သူတို့ရဲ့အရောင်းအ / အမိန့်အားမရကိုယ်တိုင်တစ်ဦးကို client မှဆန့်ကျင်သည်အတိုင်း, ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသို့မဟုတ်ကွက်သုံးပြီးအဖြစ်ရည်ညွှန်းတဲ့ကုန်သွယ်အမိန့်ဟာစနစ်ဖြင့်အလိုအလြောကျထားမထွက်ရမဟာဗျူဟာ, ဒါမှမဟုတ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဝယ်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်အမိန့်, ထိုကုန်သည်ရဲ့ program ကသတ်မှတ် parameters များကိုနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ကြသောအခါကွပ်မျက်ခံရခံရဖို့အစီအစဉ်ကိုအားဖြင့်ဈေးကွက်သို့အပ်ရသည်။
ဒါဟာန်ထမ်းတစ်ဦးပေးသောတစ်လတစ်နာရီလျှင် paid ဖြစ်ကြောင်းပျမ်းမျှငွေပမာဏကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
အကောင့် setup ကိုအတူ FXCC သို့ပြန်သွားရန်ရုံးဌာနအပေးအယူ, ကုန်သွယ်ရေးပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိစ္စများ, client ကိုမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်တိုက်ရိုက်ငွေကြေးတစ်စုံ၏ဝယ်, ဒါမှမဟုတ်အရောင်းရဆုံးပါဝင်ပါဘူးလှုပ်ရှားမှုရည်ကိုအခြားလှုပ်ရှားမှုများ, client ရဲ့အကောင့်သို့လွှဲပြောင်းရန်ပုံငွေ။
ဒါဟာကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာကုန်သည်ရဲ့မြို့တော်ကုန်သွယ်အန္တရာယ်များကိုရှောင်ကြဉ်သကဲ့သို့, ထိုကုန်သွယ်မှုစနစ်အလားအလာကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်သမိုင်းဆိုင်ရာ data တွေကိုသုံးပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးနည်းလမ်းကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်းတစ်တိုင်းပြည်နှင့်ထွက်ငွေပေးချေမှုအကြားစုစုပေါင်းတန်ဖိုးခြားနားချက်အကျဉ်းချုပ်ဖော်သောကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစကနိုင်ငံ၏နေထိုင်သူများနှင့် nonresidents အကြားအရောင်းအထည့်သွင်းအဖြစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေပေးချေ၏ချိန်ခွင်လျှာအဖြစ်လူသိများသည်။
ဒါဟာတိကျတဲ့အချိန်ကာလအတွက်နိုင်ငံ၏သွင်းကုန်နှင့်၎င်း၏ပို့ကုန်အကြားကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစလူတမျိုးရဲ့လက်ရှိအကောင့်အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်တစ်ကြာရှည်ကုန်သွယ်လိုငွေပြမှုအခြေအနေ (ကုန်သွယ်ရေးကွာဟမှု) တွင်ဖြစ်ပြီးလျှင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ထို့နောက်တိုင်းပြည်ကုန်သွယ်မှုပိုငွေရှိပြီးယင်း၏တင်သွင်းမှုထက် သာ. ကြီးမြတ်တန်ဖိုးကိုတင်ပို့နှင့်အပြန်အလှန်သောအမှု၌, ၎င်း၏ကုန်သွယ်ဖက်နှိုင်းယှဉ်ငွေကြေးကျဆင်းမယ်လို့ ဒါမှမဟုတ်ကုန်သွယ်မိတ်ဖက်များအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာတင်သွင်းမှုကုန်ကျစရိတ်ကပိုစျေးကြီးများနှင့်ပို့ကုန်အောင်အားနည်းစေ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့ရွာ (bis) အတွက်ဘဏ်
တစ်ဦးကို client တစ်ခုဘဏ်တို့ကခွင့်ပြုခဲ့အကြွေးတစ်လိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်, ဒီကိုလည်းမကြာခဏတစ်ဦး "လိုင်း" အဖြစ်ရည်ညွှန်းတယ်။
ဘဏ်လုပ်ငန်းနေ့ကဘဏ်များ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့ဖြစ်၏။ ဒါဟာဘဏ်ရုံးခွဲများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်းပါဝင်သည်ရှိရာအများပြည်သူမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားသည့်အခါကာလပတ်လုံးပါဝင်သည်။ အများအားဖြင့်နေ့ကဘဏ်လုပ်ငန်းမှာစနေနေ့, တနင်္ဂနွေနှင့်တရားဝင်သတ်မှတ်အားလပ်ရက် မှလွဲ. အားလုံးရက်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကတစ်ဦးငွေနှင့်ညီမျှအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဝယ်လိုအားပေါ်တွင်ဆောင်လုလင်မှပေးဆောင်ဖြစ်သည့်ညှိနှိုင်းတူရိယာ (ကတိမှတ်စု) အမျိုးအစားအဖြစ်ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပေးသောစာရွက်ဖြစ်ပါသည်နိုင်ပါသည်။
ဒါကငွေကြေးတစ်စုံအတွက်ပထမဦးဆုံးငွေကြေးအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ အဆိုပါအခြေစိုက်စခန်းငွေကြေးကိုတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ (ကိုထုတ်ပေးသူထံ) အရာတွင်လည်းငွေကြေးဖြစ်ပါသည်, အကောင့်အသစ်များ၏က၎င်း၏စာအုပ်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အဆိုပါ FX စျေးကွက်များတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာပုံမှန်အားဖြင့် FX ကိုးကားအများစုများအတွက်အခြေခံငွေကြေးဖြစ်စဉ်းစားသည်, ကိုးကားသည့် pair တစုံအတွက်ကိုးကားအခြားငွေကြေးနှိုင်းယှဉ်, $ 1 အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ယူနစ်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ဒီစည်းဝေးဖို့ချွင်းချက်ရှိပါသည်: ဗြိတိသျှပေါင်, ယူရိုငွေကြေးနှင့်သြစတြေးလျဒေါ်လာ။
အဆိုပါအခြေစိုက်စခန်းနှုန်းသည်အင်္ဂလန်ဘဏ်သို့မဟုတ် Federal Reserve ကဲ့သို့အတိုးနှုန်းသောဗဟိုဘဏ်သည်စီးပွားဖြစ်ဘဏ်များမှပိုက်ဆံချေးဖို့ကိုအားသွင်းပါလိမ့်မယ်။ ပိုကောင်းတဲ့အန္တရာယ်ငွေချေးပြောင်အရည်အသွေးကိုငွေချေးခြေရင်းနှုန်းကိုအထက်တစ်ခုတိုးမြှင့်မှုနှုန်းပေးဆောင်မည်, အခြေခံမှုနှုန်းကျော်ဟာသေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုမှာရာခိုင်နှုန်း။ ဥပမာ; 3.75% နှင့် 3.76% အကြားခြားနားချက်။
ဝက်ဝံ Market က
ဝက်ဝံဈေးကွက်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းများအတွက် (ယေဘုယျအားဖြင့်) စျေးနှုန်းကျဆင်းမှုတစ်ဆက်လက်ကာလလည်းမရှိတဲ့စျေးကွက်အခြေအနေဖြစ်ပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းအပေါ်ရေတိုနေသောကုန်သည်များ, သူတို့ကရောင်းချထက်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းမှာတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်ဝယ်ဖို့ရှိသည်ဘယ်မှာစျေးကွက်အခြေအနေတစ်ဦးကပြောင်းလဲမှု, မဟုတ်ရင်ထစျေးကွက်အခွအေနေ / s နဲ့သူတို့ရဲ့အပေါ်တစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းစီရင်ပါလိမ့်မယ် အကောင့်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကုန်သွယ်ရေး / s နဲ့။ တစ်ဦးကဝက်ဝံညှစ်များသောအားဖြင့်ဗဟိုဘဏ်တွေသို့မဟုတ်စျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူအသုံးပြုပုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးကွက်များတွင် created နိုင်ငံတကာဖြစ်ရပ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးက Beige သစာအုပ်ပဲအတိုးနှုန်းပေါ်တွင် FOMC အစည်းအဝေးမတိုင်မီထုတ်ဝေခြင်း, ဗဟိုဘဏ်အစီရင်ခံစာများအတွက်အသုံးအများဆုံးနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအများပြည်သူရှစ် (8) ကြိမ်မှတစ်နှစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အရာ FXCC (သို့မဟုတ်အခြားတန်ပြန်ပါတီ) မှာစျေးနှုန်းတစ်ဦးကို client ကနေငွေကြေးတစ်စုံကိုဝယ်ခြင်းငှါပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာ (တိုတောင်းသွားပါ) တစ်ဦးအနေအထားရောင်းချလိုသောအခါ client ကိုကိုးကားပါလိမ့်မည်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
လေလံ / Spread မေးပါ
ငွေကြေး၏စျေးနှုန်း၏ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးသို့မဟုတ်သုံးဂဏန်းမှပုံမှန်အားရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာ; .9630 ၏ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာလဲလှယ်မှုနှုန်းကိုပထမဦးဆုံးကိန်းဂဏန်းအဖြစ် ''0'' ဆိုလို။ ထိုကြောင့်ဈေးနှုန်းကို "ကြီးမားသောကိန်းဂဏန်း" 0.9630 ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ 0.96 ပါလိမ့်မယ်။
ယောဟနျသ Bollinger အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးတည်ငြိမ်မှုကိုတိုင်းတာသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်ပြချက်။ သူတို့ကကျနော်တို့အထက်တီးဝိုင်းမှာမြင့်မားတဲ့အဖြစ်စျေးနှုန်းများစောင့်အောက်ပိုင်းတီးဝိုင်းမှာအဖြစ်အနိမ့်နိုင်မည့်မြင့်အနိမ့်တစ်ဦးဆွေမျိုးချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပေး။
ထွက်ကိုချိုးထောက်ခံမှုသို့မဟုတ်ခုခံ၏ကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအဆင့်ကိုတဆင့်တစ်ဦးချိုးဆီသို့ဦးဆောင်ကာတူရိယာ၏စျေးနှုန်းရုတ်တရက်မြန်ဆန်မြင့်တက်လာ (သို့မဟုတ်ပြိုလဲ) ကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောတစ်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည် fixed လဲလှယ်နှုန်းနှင့်ရွှေ set ကိုစျေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်း post 'ဒုတိယကမ္ဘာစစ်သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသဘောတူညီချက်ကမ္ဘာ၏အဓိကစီးပွားရေးကိုယ်စားပြုအမျိုးမျိုးသောလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ-ပြည်နယ်များအနေဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်များအကြားခဲ့ပါတယ်။
ငွေကြေးနှင့်အခြားဆက်စပ်တူရိယာ, ဖြစ်စေမယ့်ကော်မရှင်အဘို့, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးပျံ့နှံ့အပေါ်အမြတ်အစွန်း: ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောဘဏ္ဍာရေးထုတ်ကုန်ဝယ်ရောင်းဖို့အမိန့် ပေး. စီရင်သောသူ FXCC အဖြစ်တစ်ဦးအေးဂျင့်။
အဆောက်အဦး (အိမ်) ခွင့်လက်မှတ်
စီးပွားဖြစ်ဘဏ်များတိုင်းပြည်ကျောင်းအုပ်ကြီးဘဏ္ဍာရေးစင်တာ၌, စနေနေ့သို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေထက်အခြား, စီးပွားရေးအဘို့အဖွင့်သည့်အခါမဆိုနေ့ဖြစ်၏။
တစ်ဦးသတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းမှာပိုင်ဆိုင်မှုကိုဝယ်ခြင်းငှါတစ်ဦးငွေပေးငွေယူ execute အထူးညွှန်ကြားချက်လည်းပါဝင်သည်တစ်ခုအမိန့်။ စျေးကွက်စျေးနှုန်းကန့်သတ်စျေးနှုန်းမှာ (သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်း) ဖြစ်ပါသည်တိုင်အောင် activated မပေးပါ။ တခါအစပျိုးအဆိုပါဝယ်ကန့်သတ်မိန့်ကိုလက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးမှာဝယ်ယူရန်စျေးကွက်အမိန့်ဖြစ်လာသည်။
တစ်ဦးကဝယ်ရပ်တန့်ပါကစျေးကွက်သည်အထိ activated မပါ, စျေးနှုန်းမေးပါကလက်ရှိဖောက်အထက်တွင်ထားရှိသောမှတ်တိုင်အမိန့်ဖြစ်ပါတယ်စျေးနှုန်းကိုမေးမှာပါ (သို့မဟုတ်အထက်) သည်မှတ်တိုင်စျေးနှုန်း။ တခါအစပျိုးအဆိုပါဝယ်ရပ်တန့်နိုင်ရန်လက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးမှာဝယ်ယူရန်စျေးကွက်အမိန့်ဖြစ်လာသည်။
ဒါဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ / GBP နှုန်းသည်များအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစျေးကွက်အတွက်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
အစိတ်အပိုင်းများ၏အခြေခံနေ့ချင်းညချင်းအတိုးနှုန်းကွာခြားတဲ့ငွေကြေးတစ်စုံကိုကိုင်ပြီးအဘို့အဘဏ်စာရင်းသို့မဟုတ်အကောင့်တစ်ခုထဲကနေ debited ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေကြောင်းအဆိုပါငွေပမာဏ။
Forex ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦးသယ်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားပြန်လာများကိုဖွယ်ရှိကြောင်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးအနိမ့်အတိုးနှုန်းမှာပိုက်ဆံချေးမထွက်ရတဲ့နည်းဗျူဟာပါပဲ။ ဤနည်းဗျူဟာဗဟိုဘဏ် '' ငွေချေးနှုန်းကွဲပြားသောအခါ, နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစျေးကွက်အတွက်အလွန်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။
သိုက်အပေါ်ငွေ (အကောင့်ထဲမှာငွေရန်ပုံငွေပမာဏကိုမှသက်ဆိုင်ရာထည့်သွင်းစဉ်းစားထဲသို့ပေါင်းသို့မဟုတ်အနုတ်သဘောပေါက်တံခါးပိတ်ရာထူး, အမြတ်နဲ့အရှုံးအဖြစ်ကတခြားထုတ်ယူငွေယူပြီး, ဒါမှမဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော rollOver အဖြစ်ခရက်ဒစ်, နှင့်ကော်မရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလျှင် ) သက်ဆိုင်။
CCI, ကုန်စည်ဒိုင် Channel ကိုအညွှန်း
အဆိုပါကုန်စည်ဒိုင် Channel ကိုညွှန်းကိန်း (CCI) 20 ကာလပုံမှန်ဝင်းဒိုးကိုကျော်လေ့လာတွေ့ရှိပျမ်းမျှယုတ်အဘိုးနှင့်ဈေးကွက်ထဲမှာလက်ရှိယုတ်စျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့သို့မဟုတ်တိုင်းဒေသကြီးများ '' ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒထိန်းချုပ်ရန်အတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်သည့်တစ်ဦးကဘဏ်က။ အဆိုပါ Federal Reserve ဥရောပဗဟိုဘဏ်ဥရောပဗဟိုဘဏ်ဖြစ်ပါသည်, အင်္ဂလန်၏ဘဏ်အင်္ဂလန်၏ဗဟိုဘဏ်သည်နှင့်ဂျပန်ဘဏ်ဂျပန်ဗဟိုဘဏ်ကဖြစ်ပါသည်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုများအတွက်ဗဟိုဘဏ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအရာအားဖြင့်တစ်ဦးဗဟိုဘဏ်လုပ်ရပ်, ဒါမှမဟုတ်ဗဟိုဘဏ်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူ (သို့မဟုတ်ရောင်းချနေ) ကနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုမတည်မငြိမ်ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအားကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်အစက်အပြောက်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစျေးကွက်ရိုက်ထည့်ပါ။
အဆိုပါကုန်စည်ဒိုင် Futures Trading ကော်မရှင်, ဒီဘဏ္ဍာရေးအနာဂတ်အပါအဝင်ကုန်စည်စျေးကွက်အပေါ်ကုန်သွယ်အနာဂတ်များအတွက်အမေရိကန်ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းအေဂျင်စီဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာစျေးနှုန်းကိုအချိန်တိကျတဲ့အချိန်ကာလနှစ်ခုအပြိုင်လိုင်းများ (ထောက်ခံမှုနှင့်ခုခံရေးအဆင့်ဆင့်) တို့အကြားပါရှိသောထားပြီးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကအထူးသဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း၏ညှနျကွားနှင့်မတည်ငြိမ်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုခေတ်ရေစီးကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုပုံစံများ, ဆုံးဖြတ်ရန်ကြိုးစားနိုင်ဖို့အတွက်သော graphical သတင်းအချက်အလက်နှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ဇယားလေ့လာနေသူတစ်ဦးချင်းစီဖြစ်စဉ်းစားသည်။ ဒါဟာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း Practitioner တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
CHF ဆွစ်ဖရန့်၏အတိုကောက်, ဆွစ်ဇာလန်နှင့်လီချင်စတိန်း၏ငွေကြေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆွစ်ဖရန့်ငွေကြေးကုန်သည်များက '' သည် "Swissie အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
တစ်ဦး FXCC အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူ။ တစ်ဦးချင်းစီ, ပိုက်ဆံမန်နေဂျာကော်ပိုရိတ် entity, ယုံကြည်မှုအကောင့်, ဒါမှမဟုတ်အကောင့်များ၏တန်ဖိုးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အကျိုးစီးပွားရှိကြောင်းဥပဒေရေးဆိုင်ရာ entity: အဆိုပါ client ကို, ဒါမှမဟုတ်အကောင့်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပိတ်ထားသောအနေအထားကုန်သည်သူ့ကိုယ်ပိုင်သမ္မာသတိအောက်မှာစျေးကွက်မထွက်အဖြစ်မရှိတော့ပါသောအနေအထားကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာ, ရောင်းအနေအထားတစ်ခုဝယ်အနေအထားနှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့် counterweighted လိမ့်မည်။
ချီကာဂို Mercantile ချိန်း။
ထိုကဲ့သို့သော FXCC အဖြစ်ပွဲစားကုန်သွယ်မှုနှုန်းကိုအားသွင်းစေခြင်းငှါ၎င်းကြေး။
ကုန်စည် / ကသဘာဝတွင်းထွက်သိုက်ပမာဏရှိသည့်နိုင်ငံများမှငွေကြေးပါဝင်သည်ထားတဲ့သုံး Forex စွမ်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါကုန်စည်အားလုံးများမှာ USD: / CAD, အမေရိကန်ဒေါ်လာ / AUD, အမေရိကန်ဒေါ်လာ / NZD ။ ကုန်စည်ဒိုင်အားလုံးအလွန်အမင်းကုန်စည်စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများမှဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြသည်။ ကုန်စည်စျေးကွက် '' ပြောင်းလဲမှုများကိုမှထိတွေ့မှုရရှိရှာဖွေနေကုန်သည်ကြီးများမကြာခဏဤအအားလုံးအတွက်ကုန်သွယ်မှုကြည့်ရှုပါ။
တစ်ဘဏ္ဍာရေးငွေပေးငွေယူအပေါငျးတို့သသက်ဆိုင်ရာအသေးစိတ်ကိုဖော်ပြသော counterparts တွေကိုအားဖြင့်လဲလှယ်အီလက်ထရွန်းနစ်, ဒါမှမဟုတ်ပုံနှိပ်စာရွက်စာတမ်း။
အစားအစာ, အဝတ်အစားနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: ဒီများသောအားဖြင့်အပါအဝင်လူသုံးကုန်တစ်တောင်းကို၏စျေးနှုန်းအဆင့်အတွက်အပြောင်းအလဲ၏လစဉ်အတိုင်းအတာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ နိုင်ငံများငှားရမ်းခနှင့်ပေါင်သူတို့ရဲ့ချဉ်းကပ်ထဲမှာခြားနားသည်။
အခြေချတဲ့သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးကိုနေ့စွဲ (ပုံမှန်အားဖြင့်ပွဲချင်းပြီးနေ့စွဲ) ရက်နေ့တွင်သတ်မှတ်ထားသည်အဘယ်မှာရှိအခြားငွေကြေးတစ်ခုသတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏသည်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ငွေကြေး၏သတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏကိုဝယ်သို့မဟုတ်ရောင်းဖို့ FXCC နှင့်အတူပြုသောအမှုတစ်ခု OTC (ထိုကောင်တာကျော်) သဘောတူညီချက်။ အဆိုပါပါတီနှစ်ခုမှကန်ထရိုက်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းကန်ထရိုက်ပမာဏဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါနှုန်းထားကိုတစ်ဦးချင်းစီကုန်သွယ်တစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာဒေါ်လာသို့တိကျတဲ့ငွေကြေးအားလုံး '' မဟုတ်တဲ့အမေရိကန်တဒေါ်လာအမြတ်အစွန်း / ဆုံးရှုံးမှု, ပြောင်းလေ့ရှိတယ်။
လွတ်လွတ်လပ်လပ်စည်းမျဉ်းကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အခြားငွေကြေးအဘို့ကုန်သွယ်နိုင်တစ်ဦးကငွေကြေး။ သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်စီးပွားရေးနှင့်ဆက်စပ်နေကြသည်, သူတို့၏စျေးနှုန်းများပုံမှန်အားဖြင့်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစျေးကွက်အတွက်ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအားမှတဆင့်ဆုံးဖြတ်ထားကြသည်။
ငွေကြေးတစ်စုံအတွက်ဒုတိယငွေကြေးကို။ ဥပမာ; ငွေကြေးတစ်စုံ EUR / USD ဖြင့်, ကောင်တာငွေကြေးအမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးချင်းသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးလဲလှယ်အတွက်ပါဝင်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောချေးငွေအဖြစ်စာချုပ်များ၏ underwriter ကြောင်းဘဏ်။
ဒါဟာငွေကြေး၏တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်သို့မဟုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့တိုင်းပြည်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုရည်ညွှန်းသည်။ တစ်ဦးရောင်းချခြင်းကန့်သတ်နိုင်ရန်အတွက်ကန့်သတ်စျေးနှုန်းလက်ရှိဖောက်ကားလေလံစျေးနှုန်းအထက်ဖြစ်သင့်သည်၎င်း၏ခြုံငုံတည်ငြိမ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာတစ်ဦးအထူးသဖြင့်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေး, နိုင်ငံရေးနှင့်ပထဝီအချက်များများ၏စာမေးပွဲပါဝငျသညျ။
ဤသည်ကိုလည်းတစ်ဦး "ချိန်ကိုက်တံစို့" အဖြစ်ရည်ညွှန်းတယ်။ အဆင့်တစ်သည်တိုင်းပြည်၏လဲလှယ်မှုနှုန်းသည်အခြားငွေကြေးစပ်လျဉ်းမှာသတ်မှတ်အဖြစ်ဤသည်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
ဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်အခြားတိကျတဲ့နိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲလှယ်အတွက်, တဦးတည်းနိုင်ငံခြားငွေကြေးရောင်းဖြစ်စေရန်တစ်ဦးကပွဲချင်းပြီးစာချုပ်။ ဖလှယ်အဆိုပါငွေကြေးအမေရိကန်ဒေါ်လာမရှိကြပေ။
လက်ဝါးကပ်တိုင် Pair ကို
Cryptocurrencies အရောင်းအဝယ်၏လုံခြုံရေးအတွက် cryptography ကိုသုံးပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်, ကို virtual ငွေကြေးဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ဗဟိုဘဏ်တွေ, ဒါမှမဟုတ်အစိုးရများကထုတ်ပေးသည်မဟုတ်ကြောင်းသီအိုရီအတွက်ထိုကဲ့သို့သော Bitcoin အဖြစ်အစိုးရဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းသို့မဟုတ်ခြယ်လှယ်, ကကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုအော်ဂဲနစ်သဘောသဘာဝ၏ဖြစ်ခြင်းရည်ညွှန်းတယ်။
ရသောအခါအမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်စောင်ရေအတွက်ဒါဟာအထူးသငွေစက္ကူတွေနဲ့ဒင်္ဂါးပြားပျံ့နှံ့နေတဲ့, လဲလှယ်တဲ့အတောအတွင်းအဖြစ်, သတ္တုသို့မဟုတ်စက္ကူအလတ်စားဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာသာမန်ငွေကြေးလှိုအန္တရာယ်ကို minimize အသုံးပြုသည်နှင့်တောင်း၏အလေးချိန်ပျှမ်းမျှတစ်ဘဏ္ဍာရေးကတိကဝတ်၏တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည်အဘယ်မှာရှိငွေကြေးတစ်ရွေးချယ်ရေးအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
ဒါဟာငွေကြေး၏ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အသုံးပြုထားတဲ့အီလက်ထရောနစ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်; အခြားငွေကြေး၏တန်ဖိုးကိုသို့တဦးတည်းငွေကြေး၏တန်ဖိုးပြောင်းလဲသောဂဏန်းပေါင်းစက်။ ဥပမာ; ယူရိုဒေါ်လာ။ converters နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစျေးကွက်အတွက်ရရှိနိုင်လတ်တလောစျေးကွက်ကိုးကားအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ငွေကြေး Option ကို
ငွေကြေးရွေးချယ်စရာဝယ်သောသူတစ်ဦးသတ်မှတ်ထားသောနေ့စွဲအပေါ်တစ်ဦး fixed စျေးနှုန်းမှာအခြားသို့တဦးတည်းငွေကြေးတန်ဖိုးရန်ပုံငွေတစ် fixed ငွေပမာဏဖလှယ်ပိုင်ခွင့်, ဒါပေမယ့်မပေးကတိကဝတ်, ပေးထားတယ်။
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုငွေပေးငွေယူနှစ်ခုငွေကြေးအဖြစ်သတ်မှတ်။ အဆိုပါ '' EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ '' တစ်ဦးငွေကြေးကို pair တစုံ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဤအပြည့်အဝငွေကြေးအမည်များအရပျ၌အသုံးပြုသောပုံမှန်အားဖြင့်သုံးမျိုးစာတစ်စောင်အဲဒီ ISO (စံချိန်စံညွှန်းများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းက) အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဖေါ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာ: အမေရိကန်ဒေါ်လာ, JPY, ပေါင်, EUR, နှင့် CHF ။
အများဆုံးငွေကြေးပြည်ထောင်စုရည်ညွှန်းထိုယူရိုဇုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတိကျတဲ့အဆင့်မှာသူတို့ရဲ့ငွေကြေး၏တန်ဖိုးကိုစောင့်ရှောက်ရန်သူတို့၏လဲလှယ်နှုန်းကိုထိန်းသိမ်းရန်သကဲ့သို့, ဘုံငွေကြေး (သို့မဟုတ်တံစို့) ဝေမျှဖို့နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောနိုင်ငံများတွင်အကြားသဘောတူညီချက်သည်။ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များကိုလည်းတစ်ခုတည်းငွေကြေးနှင့်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်သည့်မူဝါဒမျှဝေပါ။
တစ်ဦးငွေပေးငွေယူရာအရပျယူနိုငျအလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ clients များ, FXCC နေဖြင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းတို့အတွက်တင်ပြရပါမည်ဖြစ်သောအဆိုပါ FXCC လျှောက်လွှာဖြစ်စဉ်ကို။
နေ့စဉ် (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့၏အနီးကပ်) ဟာ Off Cut
ဒီအကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်နေ့တာ၏အဆုံးကိုကိုယ်စားပြုနေတဲ့အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်နေ့တာအတွင်းအချိန်အတွက်တစ်ခုတည်းသောအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဖြတ်ပယ်ပြီးနောက်အထဲသို့ ဝင်. မဆိုစာချုပ်များ၏ကုန်သွယ်မှုရက်စွဲ, လာမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့၌ကွပ်မျက်စဉ်းစားသည်။
ထို့နောက်ကြိုတင်အတူတူကုန်သွယ်နေ့၏အနီးကပ်မှ liquidated ထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်များတွင်ရာထူးယူတဲ့သူစျေးကစားများနှင့်ကုန်သည်များ, တစ်ရက်ကုန်သည်များအဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
ကုန်သည်ကြီးများတိကျတဲ့ကာလအတွင်းကွပ်မျက်ခံရအပေါငျးတို့သငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာမှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ တစ်ဦးကကိုယ်ပိုင်သဘောတူညီချက် blotter အရောင်းအဖို့သက်ဆိုင်ရာအားလုံးအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ အဆိုပါ Forex ကုန်သည်သဘောတူညီချက် blotter ထိုကဲ့သို့သောဖွင့်ပွဲအဖြစ်သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်နှင့်ကုန်သည်တို့ကအစပျိုးငွေကြေးရာထူး, ပိတ်ပြီးပေလိမ့်မည်။
Forex စျေးကွက်ထို့ကြောင့်များစွာသောအဖွဲ့အစည်းများအမျိုးမျိုးသောနေရာများအတွက်စာသင်ခုံဆက်ဆံကြ 24 /5ပွင့်လင်းကြသည်။ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစာသင်ခုံကိုလည်း Forex စျေးကွက်အပြင်ဘက်ကိုတွေ့ကြ၏ ဘဏ်များနှင့်ဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီတွေအတော်များများအာမခံအတွက်အရောင်းအစီရင်နိုင်ရန်အတွက်။ ပွဲစားကုမ္ပဏီတွေမှာစာသင်ခုံကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေတဲ့လက်လီကုန်သည်အဖြစ် Forex အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သောအခါ, မကြာခဏမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုးကား set နဲ့သူတို့ရဲ့ဖောက်သည် Forex ကုန်သွယ်ရာပူဇော်သက္ကာကိုရသောအခါတိုက်ရိုက်သျော, ဥပမာ, ဖြောင့်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းများမှတဆင့်စျေးကွက်ကိုရယူသုံးဆန့်ကျင်အဖြစ်ပြန့်နှံ့။
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှု (ဝယ်ယူသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်း) ၏ငွေပေးငွေယူနေတဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ်ထက်တစ်ဦးအေးဂျင့်အဖြစ်တစ်ဦးချင်း (သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက) သရုပ်ဆောင်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအတွက်ကုန်သည်တွေကုန်သွယ်မှု, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အကောင့် / s နဲ့ကုန်သွယ်မှုနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်ယူပါ။
အဆိုပါနည်းပညာရှင်ပက်ထရစ် Mulloy, ထိုနှစ်ချက်အဆ Moving ပျမ်းမျှ (ဒေမ) အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအလားအလာစံအဆရွေ့လျားပျမ်းမျှထက်လျော့နည်းသုံးနေပြီအတူပိုမိုမြန်ဆန်ပျမ်းမျှနည်းစနစ်တွက်ချက်ကပန်းခင်းလမ်းပျမ်းမျှအားပေးရန်ကြိုးစားသည်။ အဆိုပါတွက်ချက်မှုကိုလည်းရွေ့လျားပျမ်းမျှထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။
ဤ volume ၏အရွယ်အစား၏အတိုင်းအတာများနှင့်အချိန်အတွက်တိကျတဲ့အချက်မှာ, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ငွေကြေးကို pair တစုံ (ဥပမာတစ်ခုကဲ့သို့) အတွက်အရောင်းအဝယ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရရှိနိုင်သည့်ငွေဖြစ်လွယ်၏ညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။
ငွေကြေးကိုကုန်သွယ်စပ်လျဉ်း၌ဤဥပမာနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုငွေပေးငွေယူအပြီးသတ်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်၏ အမည်, မှုနှုန်းနှင့်ရက်စွဲများ။
အခြားငွေကြေး, ငွေကြေး၏အုပ်စုတစ်ခုသို့မဟုတ်စံအဖြစ်: တန်ဖိုးနှိုင်းယှဉ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးစနစ်တစ်ခုအောက်ဖက်အဘိုးပြတ်သည်။ တန်ဖိုးတစ်ခုသတ်မှတ်ငွေလဲနှုန်း, ဒါမှမဟုတ် Semi-သတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းကိုရှိသည်သောနိုင်ငံများတွင်အသုံးပြုသောတစ်ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးအစိုးရကနှင့်ငွေကြေးထုတ်ပေးဗဟိုဘဏ်အားဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်နေသည်။ တစ်ဦးကတိုင်းပြည်သည်၎င်း၏ငွေကြေးဖို့ဥပမာ, တိုက်ခိုက်ရေးကုန်သွယ်ရေးမညီမျှမှုတနျဘိုးလြော့စေလိမ့်မည်။
ဤသည်အခွန်၏ပိုက်ကွန်နှင့်မည်သည့် fixed ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးစရိတ်ကတိကဝတ်အဖြစ်တွက်ချက်တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။
မတူကွဲပြားအပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောနိုင်ပါတယ်ကြောင့်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှု၏လမ်းကြောင်းသစ်အတွက်ပြောင်းကုန်ပြီတဲ့ signal ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Deutsche, Mark ။ မတိုင်မီယူရိုဖြင့်၎င်း၏အစားထိုးနိုင်ရန်ဂျာမနီ၏ယခင်ငွေကြေးကို။
DMI, directional လှုပ်ရှားမှုအညွှန်းကိန်း
တိုက်ရိုက်လပ်ြရြားမြညွှန်းကိန်း (DMI) အများအပြားကုန်သွယ်ညွှန်းကိန်း၏တည်ထောင်သူ, ဂျေ Welles Wilder အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေတိုက်ရိုက်လပ်ြရြားမြညွှန်ပြချက်စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာပျမ်းမျှ Direct လပ်ြရြားမြညွှန်းကိန်း (ADX) နဲ့တွဲဖက်အတွင်းတွက်ချက်နေကြသည်။ နှစ်ဦးကိုညွှန်ကိန်းတခုအပြုသဘောဆောင်သောကပစ (+ ကပစ) နှင့်တစ်ဦးအနုတ်ကပစ (-DI) ကြံစည်နေကြသည်။
ဒေါ်လာစျေးနှုန်းတစ်ဒေါ်လာနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ငွေကြေး (ဒေါ်လာ) ၏ငွေလဲလှယ်နှုန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ အများစုမှာငွေလဲနှုန်းကောင်တာငွေကြေးအဖြစ်အခြေစိုက်စခန်းငွေကြေးနှင့်အခြားငွေကြေးအဖြစ်တစ်ဒေါ်လာကိုအသုံးပြုပါ။
ဤသည် depositing, ဒါမှမဟုတ်မူရင်းတိုင်းပြည်အတွက်ငွေကြေးရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့သက်ဆိုင်သည့်အတိုးနှုန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
တစ်ဦးနှုတ်သဘောတူညီချက်ကွပ်မျက်ခံရခြင်းနှင့်ယခုစည်းနှောင်သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်ထားပြီးကြောင်းညွှန်ပြနိုင်ရန်အတွက် FXCC ကိုယ်စားလှယ်များအသုံးပြုသောအဆိုပါအသုံးအနှုန်း။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက် bearish အနာဂတ်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုညွှန်ပြစေခြင်းငှါတစ်ဦးဇယားပုံစံဖွဲ့စည်းရေးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Dovish သည့်စိတ်ဓါတ်များတစ်ခုသို့မဟုတ်ဗဟိုဘဏ်ကစီးပွားရေးကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ရှာဖွေနေခြင်းနှင့်ငွေဖောင်းပွမှုနှင့် ပတ်သက်. ရန်လိုလုပ်ရပ်တွေကိုယူမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်လာသောအခါအသုံးပြုသောဘာသာစကား၏လေသံကိုရည်ညွှန်းသည်။
ဒါကစီးပွားရေးညွှန်းကိန်းများ, မက်ထရစ်, ဒေတာများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီနိုင်ငံဒေသနှင့်လွတ်လပ်သောစီးပွားရေးဆန်းစစ်ကုမ္ပဏီဖြန့်ချိလိမ့်ကြောင့်အစီရင်ခံစာများစောင့်ကြည့်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ပြက္ခဒိန်သည်။ သူတို့ကစျေးကွက်အပေါ်သက်ရောက်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး, ဒေတာထုတ်များသောအားဖြင့်အညီအဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောနေကြသည်; သူတို့အားအကြီးမြတ်ဆုံးထိခိုက်မှုများသောအားဖြင့် "မြင့်သောသက်ရောက်မှု" အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်ရှိသည်ဖို့ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
EMA, အဆပျမ်းမျှ Moving
အဆိုပါအဆပျမ်းမျှ (EMA) Moving ပိုပြီးမကြာသေးမီစျေးနှုန်းများပိုမိုသင်္ချာအလေးချိန်အားမရ, စျေးနှုန်းများပျမ်းမျှကိုယ်စားပြုတယ်။ လတ်တလောစျေးနှုန်းမှလျှောက်ထားအဆိုပါတွက်ဆအသုံးပြုသူကရွေးချယ်သည့်ရွေ့လျားပျှမ်းမျှ၏ရွေးချယ်ထားသောကာလပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အဆိုပါ EMA များအတွက်ကာလတိုတောင်း, ပိုအလေးချိန်လတ်တလောစျေးနှုန်းမှလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။
နေ့အမိန့် (EOD) ၏အဆုံး
ဤသည်ကိုဝယ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးသတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းမှာတစ်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာရောင်းဖို့အမိန့်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်, အမိန့်ကုန်သွယ်၏အဆုံးတိုင်အောင်အပွင့်လင်းဖြစ်နေဆဲပင်။
တစ်ခုခုကို Way ကိုစျေးကွက်
တစ်ဦးအထူးသကာလများအတွက်လေလံနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုကိုနှုန်းထားများနှစ်ဦးစလုံး, အတိအကျတူညီနေကြသည်သောအခါ, ယူရို Interbank သိုက်ဈေးကွက်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်အခြေအနေကိုအဖြစ်သတ်မှတ်။
အွန်လိုင်းအရစ်ကျအကောင့်မှတဆင့်ငွေကြေးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်။ အီလက်ထရောနစ်ငွေကြေးကုန်သွယ်အွန်လိုင်းအရစ်ကျအကောင့်မှတဆင့်ရရှိနိုင်သောစျေးကွက်ငွေလဲနှုန်းမှာနိုင်ငံခြားငွေကြေးဖို့အခြေစိုက်စခန်းငွေကြေး၏ပြောင်းလဲခြင်းလွှမ်းခြုံ။ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာမှတဆင့်ပြုလုပ်အတူတကွဝယ်လက်နှင့်ရောင်းသူဆောင်တတ်၏နှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းကိုသုံးပြီးကို virtual စျေးကွက်သောအရပ်တို့ကိုမဖန်တီးပေးပါတယ်။
ဥရောပငွေကြေးယူနစ် (, ECU)
ဥရောပသမဂ္ဂ၏အဖွဲ့ဝင်များအကြားပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုစနစ်တစ်ခုအဖြစ်, ဒါဟာစီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒများညှိနှိုင်းနှင့်ဘုံငွေကြေးစနစ် '' ယူရိုပါဝငျသညျ။
တစ်ဦးလဲလှယ်ဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ, ယူရိုတန်ဖိုးကာလတိုကြွေးမြီတူရိယာ၏လမ်းဖြင့်, ယူရိုငွေကြေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ရန်ပုံငွေကုန်သွယ်ကြောင့်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
Eurocurrency အမျိုးသားရေးအစိုးရများသို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းတို့ကယင်း၏နေအိမ်စျေးကွက်အပြင်ဘက်အပ်နှံငွေကြေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမဆိုငွေကြေးရန်နှင့်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်ဘဏ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဥပမာတစ်ခုသကဲ့သို့၎င်း, တောင်ကိုရီးယား, တောင်အာဖရိကမှာရှိတဲ့ဘဏ်မှာငွေပြီးနောက် "eurocurrency" ဖြစ်စဉ်းစားသည်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ "euromoney ။ "
Eurodollars ထို့ကြောင့်သူတို့က Federal Reserve ၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင်မလာကြဘူး, အမေရိကန်ပြင်ပမှာဘဏ်တွေမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတိုင်းတာအချိန်သိုက်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အကျိုးဆက်ထိုကဲ့သို့သောသိုက်ဥပမာ, ယူအက်စ်အေအတွင်းအလားတူသိုက်ထက်အများကြီးလျော့နည်းစည်းမျဉ်းမှဘာသာရပ်ဖြစ်သကဲ့သို့
ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) အနေနဲ့စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့အဖြစ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာ 28 နိုင်ငံများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံကိုးလက်ရှိသူတို့၏အရာရှိတဦးကငွေကြေးအဖြစ်ယူရိုသုံးပါ။ အဆိုပါဥရောပလူပျို Market ကလေးပါးကိုကျောင်းအုပ်ကြီးလွတ်လပ်ခွင့်လိုက်နာရန်, 12 အတွက် 1993 နိုင်ငံတွေအားဖြင့်သာတည်သဖြင့်, ကုန်ပစ္စည်းများ, ဝန်ဆောင်မှုများ, လူများနှင့်ပိုက်ဆံ: များ၏လှုပ်ရှားမှု။
ပိုလျှံ Margin စာရင်း
လက်ရှိပွင့်လင်းရာထူးဆန့်ကျင်ရဲ့ margin အတွက်အသုံးပြုမရကြောင်း FXCC နှင့်အတူငွေပိုက်ဆံ။
ဘဏ္ဍာရေးအရောင်းအဖလှယ်ဖို့စပ်လျဉ်းတစ်ဦးလဲလှယ်ယေဘုယျအားဖြင့်တူရိယာကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်မကြာခဏစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဥပမာ: နယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်း, ချီကာဂိုကုန်သွယ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့။
ထည့်သွင်းရန်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့် devices များစီးနှင့်စီးထွက်ထိန်းချုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အစိုးရများနှင့်ဗဟိုဘဏ်များကအရပျ၌ထားတစ်ဦးကစနစ်,: လိုင်စင်မျိုးစုံငွေကြေး, ခွဲတမ်း, လေလံ, ကန့်သတ်, လေဝိနှင့်ဝန်ပို။
ချိန်းနှုန်းယန္တရား - ERM
တစ်ဦးလဲလှယ်မှုနှုန်းယန္တရား fixed ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်း၏တစ်ဦးအယူအဆသည်အခြားငွေကြေးရန်ငွေကြေးရဲ့ငွေလဲနှုန်းဆွေမျိုးထိန်းချုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့စနစ် margins- ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းမာဂျင်၏ကန့်သတ်အတွင်းငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်း၏အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲရှိပါသည်။ တစ်ပိုင်းငွေကြေးစနစ်က pegged အဖြစ်တစ်ဦးကငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းယန္တရားကိုမကြာခဏရည်ညွှန်းတယ်။
တစ်လျော့နည်းကုန်သွယ်နှင့်လဲလှယ်ငွေကြေးကိုတစ်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ဖော်ပြချက်။ ထူးခြားဆန်းပြားငွေကြေး illiquid ဖြစ်ကြပြီးဥပမာအားဖြင့်များ၏စျေးကွက်အတိမ်အနက်ကိုအားနည်းနေသည်ယူရိုထို့ကြောင့်အများကြီးနိမ့်ကျ volumes ထဲမှာကုန်သွယ်နေကြသည်။ တစ်ဦးထူးခြားဆန်းပြားငွေကြေးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်မကြာခဏ ပို. စျေးကြီးသည့်ကိုးကားကဲ့သို့ဖြစ်ရနိုင် - လေလံ / တသမတ်တည်းကျယ်ပြန့်သည်ပြန့်နှံ့မေးကြည့်ပါ။ ထူးခြားဆန်းပြားအလွယ်တကူစံအရစ်ကျအကောင့်အတွက်ကုန်သွယ် (သို့မဟုတ်ရှိနိုင်ပါ) မထားပေ။ ထူးခြားဆန်းပြားငွေကြေး၏ဥပမာထိုင်းဘတ်ငွေများနှင့်အီရတ် dinar ပါဝင်သည်။
ဒါဟာအလားအလာအမြတ်သို့မဟုတ်အရှုံးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရသောစျေးကွက်စျေးနှုန်းထဲမှာ fluctations နှင့်ဆက်စပ်အန္တရာယ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
ဒါဟာ Non-အကြမ်းခံများနှင့်တာရှည်ခံအမိန့်များနှင့်အစီအမံများတင်ပို့ရောင်းချမှုများကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစာရင်းဇယားများ၏အသေးစိတ် unfilled အမိန့်များနှင့်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူ၏သိုလှောင်မှုပေးအမေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်းဗျူရိုကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်။
ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်ပုံမှန်မဟုတ်မိုးသည်းထန်စွာကုန်သွယ်နဲ့ပေါင်းစပ်မတည်ငြိမ်မှု၏ထူးထူးခြားခြားမြင့်မား, တွေ့ကြုံသောအခါလည်းအခွအေနေလူသိများဝယ်လက်နှင့် / သို့မဟုတ်ရောင်းသူထံမှထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအားအခြေအနေများတစ်ခုအချိုးမညီမျှမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စျေးကွက်အတွက်စျေးနှုန်းများ, ဒါမှမဟုတ်နှုန်းထားများ၏လျင်မြန်သောလှုပ်ရှားမှု။ တစ်ဦးထက်ပိုစနစ်တကျစျေးကွက်ပြန်လည်စတင်သည်အထိထိုကဲ့သို့ခွအေနမြေားနှုန်းထားများ, ဒါမှမဟုတ်စျေးနှုန်းများမှာတော့ဖောက်သည်အလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာ Federal Reserve Bank ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွင်းဘဏ်များအားဖြင့်ကျင်းပသည့်ငွေခွင်။
ဤသည်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Federal Reserve ဘဏ်တစ်ခုအတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် FOMC အဖြစ်လူသိများ။ ဤသည်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကောက်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်းငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒ၏သင်တန်းဆုံးဖြတ်ထားတဲ့တစ်ဦးချင်းစီ၏ကိုယ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ FOMC ဖက်ဒရယ်ရန်ပုံငွေမှုနှုန်းနှင့်လျှော့စျေးနှုန်းမှာ pegging များအတွက်တိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိသည်။ နှစ်ဦးစလုံးနှုန်းထားများပိုက်ဆံထောက်ပံ့ရေးတိုးတက်မှုနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိစီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုများ၏အဆင့်ဆင့်၏အဆင့်ဆင့်ထိန်းချုပ်ထားအတွက်သြဇာရှိပါတယ်။
Federal Reserve ဘုတ်အဖွဲ့
တစ်ဦး 14 နှစ်သက်တမ်းများအတွက်အမေရိကန်သမ္မတကခန့်အပ်သည့် Federal Reserve System ကို၏ဘုတ်အဖွဲ့, ဘုတ်အဖွဲ့တဦးကိုလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လေးနှစ်ခန့်အပ်သည်။
Federal Reserve System ကို
ယူအက်စ်အေ၏ဗဟိုဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်, Federal Reserve ဘုတ်အဖွဲ့ကိုတိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် 12 ခရိုင်ထိန်းချုပ်ရန်, 12 Federal Reserve ဘဏ်ပါဝင်သော။ ဗဟိုဘဏ်၏အသင်းဝင်ပြည်နယ်စင်းလုံးငှားဘဏ်များများအတွက်ငွေကြေး၏ Comptroller အားဖြင့်စင်းလုံးငှားဘဏ်များများအတွက်မသင်မနေရနှင့် optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက client ကိုအမိန့်၏ရလဒ်အဖြစ်ကို client ရဲ့အကောင့်ပေါ်တွင် / ကိုယ်စားကွပ်မျက်ခံရတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးတာနဲ့ပြည့်အမိန့်, ဖျက်သိမ်းပြင်ဆင်ဒါမှမဟုတ် client ကိုအားဖြင့်သက်ညှာမရနိုင်ပါ။
ဒါဟာရှည်လျားသို့မဟုတ်အတိုသွားကြဖို့ client ကိုရဲ့အမိန့်ကွပ်မျက်ခံရသောမှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။
ဒါကလေလံအာမခံသို့မဟုတ်ကိုးကားပမာဏကိုမှစျေးနှုန်းတက်မမေးမယ့်ကုမ္ပဏီတခုနှုန်းများအတွက်တောင်းဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏စျေးနှုန်းကိုးကားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဒါဟာ ကိုးကား. ပါတီအစက်အပြောက်အခြေချဘို့, သဘောတူညီချက် execute ဆန္ဒရှိသောအရာမှာစျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။
ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒအကောင်အထည်ဖော်များအတွက် tool အဖြစ်အခွန်ကောက်ခံမှုနှင့် / သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုများအသုံးပြုမှု။
ဤအစက်အပြောက်အလားတူလစဉ်ပြက္ခဒိန်ရက်စွဲများဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ခုချွင်းချက်ရှိပါတယ်။ နောက်ထပ်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များအတွက်တန်ဖိုးကိုရက်စွဲများအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုပါ။
ဒါဟာရောင်းသူမှဝယ်လက်ထိန်းညှိကစားသောနှုန်းကိုထူထောင်နေဖြင့်နှုန်းထားများအဆုံးအဖြတ်များအတွက်နည်းလမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုသီးခြားသတ်မှတ်ထားသောအချိန်များတွင်နေ့စဉ်ဖြစ်စေတစ်ကြိမ်, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ကြိမ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်ခရီးသွားဧည့်မှုနှုန်းကိုတည်ထောင်ဘို့, အချို့ငွေကြေးအသုံးပြုတဲ့။
အဆိုပါဘဏ္ဍာရေးသတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ရေး (fix) protocol ကို 1992 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်ကအာမခံအရောင်းအနှင့်စျေးကွက်နှင့်ဆက်စပ်သောသတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်တစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းမောင်းနှင်စာတိုပေးပို့ရေးစံဖြစ်ပါတယ်။
ငွေကြေးစျေးနှုန်းသည်အခြားငွေကြေးတွေနဲ့ paralleled အဆိုပါထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအားအပေါ်ဆောက်လုပ်ထားစျေးကွက်တပ်ဖွဲ့များကသတ်မှတ်ထားရာတစ်ခုငွေလဲနှုန်းအဖြစ်သတ်မှတ်။ Floating ငွေကြေးငွေကြေးအာဏာပိုင်များကဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုမကြာခဏဖြစ်တဲ့အခါ, float တစ်ညစ်ပတ် float အဖြစ်လူသိများသည်။
ဖက်ဒရယ်ကိုဖွင့်စျေးကော်မတီ, ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒ၏ညှနျကွားသတ်မှတ်ထားကြောင်း 12 အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သည်ဟုဗဟိုဘဏ်စနစ်အတွင်းကော်မတီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကြေညာချက်များအတိုးနှုန်းအပေါ်ကိုဖန်ဆင်းဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. အများပြည်သူအားအသိပေး။
အဆိုပါဝေါဟာရကို "နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှု" နိုင်ငံခြားငွေကြေးအတွက်ချွတ်လဲလှယ်ကုန်သွယ်ကိုရည်ညွှန်းသည်, ကုန်သွယ် Forex အဘို့အဘယ်သူမျှမတစ်ခုတည်း, ဗဟို, လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အသိအမှတ်ပြုလဲလှယ်ရှိသေး၏။ အဆိုပါအသုံးအနှုန်းမှာလည်းထိုကဲ့သို့သောချီကာဂို Mercantile ချိန်းမှာ IMM အဖြစ်ဖလှယ်မှုအပေါ်ငွေကြေးကုန်သွယ်ရည်ညွှန်းပေမည်။
တစ်မှုနှုန်းမှာတိကျတဲ့ရက်စွဲနှစ်ခုငွေကြေးတစ်ဦးတစ်ပြိုင်နက်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကပါဝင်ပတ်သက်ရသောငွေသွင်းငွေထုတ်မှာသဘောတူညီခဲ့တဲ့နှုန်းအနာဂတ်တွင်နောက်ထပ်ရက်စွဲတစ်ခုမှာလည်း '' တိုတိုခြေထောက် '' အဖြစ်လူသိများစာချုပ်၏နိဂုံး၏ထိုအချိန်ကသဘောတူညီခဲ့ စာချုပ်ကာလ - '' ရှည်လျားသောခြေထောက် '' ။
ငွေကြေးအားလုံး၏စျေးနှုန်းထဲမှာခြားနားချက် exploit ရန်ကြိုးစားနေ Forex ကုန်သည်များကအသုံးပြုတစ်ဦးကကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ။ ဒါဟာတိကျတဲ့တစ်စုံတစ်ပွဲစားကကမ်းလှမ်းသောကွဲပြားခြားနားသောန်၏အားသာချက်ကြာပါသည်။ အဆိုပါမဟာဗျူဟာအခွင့်အလမ်းများအစာရှောင်ခြင်းတုံ့ပြန်ပါဝငျသညျ။
ဝယ်ရောင်း, လဲလှယ်ခြင်းနှင့်ငွေကြေးအပေါ်သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်: Forex ဈေးကွက်သင်တန်းသားများကိုနိုငျသောအခါနာရီအဖြစ်သတ်မှတ်။ အဆိုပါ Forex စျေးကွက်, ငါးရက်တစ်ပါတ်ပွင့်လင်း 24 နာရီနေ့ဖြစ်၏။ ငွေကြေးစျေးကွက်များပေါင်းစပ်: ဘဏ်များ, စီးပွားဖြစ်ကုမ္ပဏီများ, ဗဟိုဘဏ်တွေ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီများ, စောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေများ, လက်လီ Forex ပွဲစားများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ။ နိုင်ငံတကာငွေကြေးဈေးကွက်မျှအလယ်ပိုင်းလဲလှယ်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ဖလှယ်မှုနှင့်ပွဲစားများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်ကိုပါဝငျသညျ။ Forex ကုန်သွယ်နာရီကုန်သွယ်တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်တိုင်းပြည်၌ဖွင့်တဲ့အခါမှာအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ အဓိကစျေးကွက်ထပ်သောအခါ, အာရှဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့တွင်, ကုန်သွယ်ရေး၏အမြင့်ဆုံးအသံအတိုးအကျယ်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီအလေ့စျေးကွက်စိတ်ဓါတ်များ bearish နှင့်အပြန်အလှန်အီရန်ကနေပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်လျှင်လျင်မြန်စွာသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက်တစ်နေ့တာကုန်သည်များကအသုံးပြုညွှန်းကိန်းများ၏အစုကို, ကိုရည်ညွှန်းသည်။ တစ်နည်းကထောက်ခံမှုများနှင့်ယဉ်ပါးအဆင့်ဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ယခင်နေ့ကဖွင့်ကုန်သွယ် session တစ်ခုကနေ, မြင့်မားသောအနိမ့်များနှင့်နီးကပ် (ဆဆ): Forex မဏ္ဍိုင်မှတ်၏ပျမ်းမျှအဖြစ်တွက်ချက်ကြသည်။
Forex Spread လောင်းကစား
ပြန့်ပွား - ငွေကြေးကမ်းလှမ်းကုမ္ပဏီများအလောင်းအစားပြန့်ပွားကိုးကားနှစ်ခုစျေးနှုန်းများ, အလေလံနှင့်မေးဖို့စျေးနှုန်းအလောင်းအစားပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ငွေကြေးတစ်စုံ၏စျေးနှုန်းကိုမေးစျေးနှုန်းထက်လေလံစျေးနှုန်းထက်နိမ့်, ဒါမှမဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားကြလိမ့်မည်ဆိုပါကကုန်သည်ကြီးများအလောင်းအစား။
မဆိုပေးထားသောအချိန်မှာအထူးသဖြင့်ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ကုန်သွယ်မှုရိုက်ထည့်ဖို့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများ, အပေါ်အခြေခံပြီး computer software ကုန်သွယ်ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ Forex စက်ရုပ်, လက်လီကုန်သည်များများအတွက်အထူးသ, ကုန်သွယ်ရေး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ element ကမဖယ်ရှားအတွက်မကြာခဏအထောကျအကူဖြစ်ကြသည်။
ဤသည်ကိုမကြာခဏနည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဇယား tools များအားဖြင့် generated အချက်ပြမှုများ, ဒါမှမဟုတ်အခြေခံသတင်းဖြစ်ရပ်များနှင့်အချက်အလက်အစုတခုပေါ်အခြေခံပြီးဝယ်, ဒါမှမဟုတ်တိကျတဲ့အချိန်မှာငွေကြေးကို pair တစုံရောင်းဖို့ရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်အခြေခံပြီးကုန်သွယ်အဖြစ်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကကုန်သည်ရဲ့ကုန်သွယ်မှုစနစ်ယေဘုယျအားဖြင့်သမိုင်းကြောင်းအမြတ်အစွန်းအရောင်းအဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးသောသူတို့ရဲ့ရောင်းမဝယ်ဆုံးဖြတ်ချက်များဖန်တီးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအချက်ပြမှုများအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ '' ရှေ့ဆက်သဘောတူညီချက် 'သို့မဟုတ်' 'အနာဂတ်' 'တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာစကားရပ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပိုများသောအထူးဘဏ်နှင့်ဖောက်သည်တစ်ဦးအကြားတစ်ဦးရှေ့ကိုစာချုပ်ကဲ့သို့တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအစီအမံများအတွက်။
ရှေ့ဆက်နှုန်းရှေ့ဆက်နှင့်အစက်အပြောက်နှုန်းထားများအကြားခြားနားချက်ကိုကိုယ်စားပြု, ရှေ့ဆက်မှတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကိုးကားထားပါသည်။ အမှန်တကယ်ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုဆန့်ကျင်အတိုင်းရှေ့ဆက်နှုန်းကိုရရှိရန်, ရှေ့ဆက်အချက်များကိုလည်းကောင်းဆက်ပြောသည်ဒါမှမဟုတ်လဲလှယ်မှုနှုန်းကနေနုတ်နေကြသည်။ မှတ်နုတ်သို့မဟုတ်ပေါင်းထည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်အရောင်းအဝယ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နှစ်ဦးစလုံးငွေကြေးများအတွက်သိုက်နှုန်းထားများအကြား differential ကိုကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအခြေစိုက်စခန်းငွေကြေးမြင့်မားအတိုးနှုန်းဟာရှေ့ကိုဈေးကွက်ထဲမှာငွေကြေးကိုးကားအောက်ပိုင်းအတိုးနှုန်းမှလျှော့ဖြစ်ပါတယ်အတူ။ အဆိုပါရှေ့ဆက်အချက်များပွဲချင်းပြီးမှုနှုန်းကနေနုတ်နေကြသည်။ အခြေစိုက်စခန်းငွေကြေးကိုတစ်ဦးပရီမီယံမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ပိုင်းအတိုးနှုန်းသည်ရှေ့ဆက်မှတ်ရှေ့ဆက်နှုန်းကိုရယူနိုင်ရန်အတွက်, အစက်အပြောက်မှုနှုန်းကိုထည့်သွင်းနေကြသည်။
ငွေကြေးဖောင်းပွမှု, ကြီးထွားမှု, ကုန်သွယ်ရေးချိန်ခွင်လျှာ, အစိုးရလိုငွေပြမှုနှင့်အတိုးနှုန်း: ဤကဤကဲ့သို့သောအချက်များပါဝင်သည်မည်, ငွေကြေးများ၏ဆွေမျိုးတန်ဖိုးကိုများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖွဲ့စည်းအဖြစ်လက်ခံသောဒေသဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နိုင်ငံတော်အဆင့်မှာနိုင်တဲ့ macro စီးပွားရေးအချက်များဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားအချက်များကြီးမားတဲ့လူဦးရေထက်အနည်းငယ်ကို select လုပ်ပါတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
FXCC နှစ်ခုအဖွဲ့အစည်းများ၏ပါဝင်သောအမျိုးမျိုးတရားစီရင်မှုအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြောင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည်: FX ဗဟိုရှင်းလင်း, Ltd နှင့်ဗဟိုရှင်းလင်း, Ltd.
FXCC Demo ထရေးဒင်းပလက်ဖောင်း
FXCC အစစ်အမှန်ကုန်သွယ်များအတွက် FXCC ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ဦးအပြည့်အဝအင်္ဂါရပ်ပုံတူသောသရုပ်ပြကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းအစီအစဉ်ပေးပါသည်။ အဆိုပါသရုပ်ပြကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း FXCC clients များကန်ထရိုက်အရောင်းအကွပ်မျက်ခြင်းဖြင့်မဆိုမြို့တော်ဒီလောက်စွန့်ခြင်းမရှိဘဲ, အမှန်တကယ်ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာမှခွင့်ပြုပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းထို့ကြောင့်မည်သည့်အမြတ်အစွန်း, အမှန်တကယ်အပေးအယူသို့မဟုတ်ကန်ထရိုက်ပါဝင်ပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ပြီးအရှုံးကို virtual ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကသာသရုပ်ပြရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တင်းကြပ်စွာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ FXCC အန္တရာယ်ထုတ်ဖော် CFDs အတွက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာပါဝင်ပတ်သက်အန္တရာယ်များဖော်ပြထားပါတယ်နှင့်တစ်ဦးအသိပေးအခြေခံပေါ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်တွေယူပြီးအတွက် client ကိုကူညီပေးဖို့။
အမေရိကန်နိုင်ငံ, ဂျာမနီ, ဂျပန်, ပြင်သစ်, ဗြိတိန်, ကနေဒါနှင့်အီတလီနိုင်ငံ: ခုနစ်လုံးကိုဦးဆောင်စက်မှုဇုန်နိုင်ငံများအဖြစ်သတ်မှတ်။
ဒါက G7 ပေါင်းဖြစ်ပါသည်: ဘယ်လ်ဂျီယံ, နယ်သာလန်နှင့်ဆွီဒင်, IMF ကဆွေးနွေးမှုများနှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့အုပ်စုတစု။ ဆွစ်ဇာလန်တစ်ခါတစ်ရံ (ဆိုနိုင်သည်) ပါဝင်ပတ်သက်သည်။
အဆိုပါဂရိတ်ဗြိတိန်ပေါင်ဘို့က Short ။
Long က Going
ငွေကြေးတစ်စုံဝယ် action ကိုအဖြစ်သတ်မှတ်။ ဥပမာ; တစ်ဦး Client အ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာဝယ်လျှင်, ထိုသူတို့ယူရို '' တာရှည်မယ့် '' မည်ဖြစ်သည်။
က Short Going
ဒါကငွေကြေးတစ်စုံရောင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ; တစ်ဦး Client အ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုရောင်းပါလျှင်, ထိုသူတို့ယူရို '' တိုတိုသွား '' မည်ဖြစ်သည်။
ဒါက fixed ငွေကြေးစနစ်ကအဖြစ်သတ်မှတ်သည်, တစ်ဦးကအစိုးရနှင့်သို့မဟုတ် Central ဘဏ်အရာအောက်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အခြေခံဂုဏ်သတ္တိများရွှေသို့ကူးပြောင်းနိုင်သည့်၎င်းတို့၏ငွေကြေးကိုကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူကအမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နိမ့်ဆုံးအဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ရန်မျှော်လင့်နေသည်, Non-ငွေကြေးအသုံးပြုမှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစလဲလှယ်၏ကျောင်းအုပ်ကြီး medium အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်, ရွှေများအတွက်လွတ်လပ်စွာယှဉ်ပြိုင်ငွေကြေးရသောရွှေစနစ်များ, သို့မဟုတ်ဘဏ်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။
ပယ်ဖျက်ထားသည်မှာ (GTC အလို့ငှာ) သေးပါဘူး '' ကောင်းသော
ဒါကြောင့်ကွပ်မျက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ကုန်သည်များကဖျက်သိမ်းသည်အထိတက်ကြွဖြစ်ဆက်လက်တဲ့ fixed စျေးနှုန်းမှာရောင်းမဝယ်ဖို့အမိန့်။
ဒါဟာပြည်ပဝင်ငွေဂျီဒီပီပေါင်း output ကိုထံမှရရှိခဲ့ပြီးဝင်ငွေ, ဝင်ငွေ, ဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရရှိသောညီမျှစီးပွားရေးကိန်းဂဏန်းဖြစ်ပါသည်။
ဖတ်ကြည့်ပါ: ကောင်းမွန်သော '' ဖျက်သိမ်းသေးပါဘူး။
လက်ကိုင်ပုဒဿမဖျက်သိမ်းရေး, အဘိုးကိုးကား၏မြေတပြင်လုံးအရေအတွက်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစျေးကွက်မှာတော့လက်ကိုင်ကိုလည်းလေလံစျေးနှုန်းနှင့်ငွေကြေးအဘို့အကမ်းလှမ်းမှုကိုစျေးနှုန်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပုံပေါ်ထားတဲ့ကိုးကားခံရသည့်စျေးနှုန်း၏အစိတ်အပိုင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာ; အဆိုပါ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေကြေးကို pair တစုံ 1.0737 တစ်ဦးလေလံရှိပြီး 1.0740 တောင်းလျှင်, လက်ကိုင် 1.07 ပါလိမ့်မယ်; အဆိုပါလေလံနှင့်မေးဖို့စျေးနှုန်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ညီမျှသည့်ကိုးကား။ ဒါ့အပြင်မကြာခဏလက်ကိုင်မကြာခဏထင်ရှားတဲ့စိတ်ပျက်ဖွယ်အဆင့်ကိုဖော်ပြရန်တစ်ဦးထားသောစာပိုဒ်တိုများအဖြစ်အသုံးပြုနေသည် "ဟုအဆိုပါကြီးမားသောကိန်းဂဏန်း" အဖြစ်ရည်ညွှန်းဥပမာအဘို့, DJIA 20,000 ချဉ်းကပ်။
hard ငွေကြေးလည်းခိုင်မာတဲ့ငွေကြေးအဖြစ်လူသိများနှင့်နိုင်ငံတကာတွင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်အတွက်ငွေကြေးများ၏တန်ဖိုးအထားဆုံးပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာအမြင်ကျယ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုများအတွက်ငွေပေးချေ၏ပုံစံများအဖြစ်တကမ္ဘာလုံးအသိအမှတ်ပြုငွေကြေးဖြစ်ကြသည်။ hard ငွေကြေးယေဘုယျအားဖြင့်တိုတောင်းသောကာလကိုတစျဆငျ့တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့် Forex ဈေးကွက်အတွက်အလွန်အရည်ဖြစ်ကြသည်။ hard ငွေကြေးအားကောင်းတဲ့စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူလူအမျိုးမျိုးကနေထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
အီရန်အနေဖြင့် bearish လမ်းကြောင်းသစ်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ဖို့, ဥပမာ, တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုပယ်ဖျက်ခံရအဆိုတင်သွင်းကြောင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများတွင်အသုံးပြုတစ်ဦးကဇယားပုံစံ။
ဤသည်အလွန်မြန်ဆန်စွာအမြန်နှုန်းမှာဖျော်ဖြေအမိန့်များတစ်ပြိုင်နက်ကြီးမားသောအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူ algorithmic ကုန်သွယ်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ, ဖြစ်ပါတယ်။
အနိမျ့ / အမြင့်
ဤသည်စျေးကွက်လေလံခြမ်းမှာရောင်းချနေသည့်အခါ, တစ်ဦးငွေကြေးကို pair တစုံ၏ရောင်းသူတစ်ဦး၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောတစ်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ (HKD), ဟောင်ကောင်၏ငွေကြေးများအတွက်ငွေကြေးအတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမကြာခဏသင်္ကေတ $, ဒါမှမဟုတ်ဟောင်ကောင် $ ကိုယ်စားပြု 100 ဆင့်၏ဆောက်လုပ်ထားသည်။ သုံးတရုတ်မှတ်စုထုတ်ပေးဘဏ်များဟောင်ကောင်အစိုးရမူဝါဒဘာသာရပ်ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာထုတ်ဖို့အခွင့်အာဏာရှိသည်။ အရံအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုင်ပြီးအစိုးရလဲလှယ်ရန်ပုံငွေမှတဆင့်ဟောင်ကောင် $ ပြောင်းရွှေ့။
ငွေကြေးကိုကုန်သွယ်စပ်လျဉ်းမှာတော့ဒီငွေကြေးကို pair တစုံ၏ဝယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
Market ကထုတ်ဝေအိမ်ရာဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီး, အဓိကအားဖြင့်အမေရိကန်နှင့်ဗြိတိန်အတွက်အိမ်ရာနှင့်စပ်လျဉ်းသောစီးပွားရေးညွှန်းကိန်းများရွေ့လျား။
ဤအချိန်မဆိုပေးထားသောအချိန်အတွင်းစတင်ကြပြီအသစ်ကလူနေအိမ်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများ (ပုဂ္ဂလိကပိုင်အိမ်များ), များသောအားဖြင့်အသီးအသီးတစ်လကိုးကားသို့မဟုတ်နှစ်စဉ်များ၏အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Ichimoku မော်ဒယ်, အချိန်အမျိုးမျိုးရမှတ်ကျော်သမိုင်းဝင်စံချိန်တင်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်နိမ်များ၏နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ရမှတ်အသိအမှတ်ပြုညွှန်ပြချက်အောက်ပါတစ်လမ်းကြောင်းသစ်ခန့်မှန်းတဲ့ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်အဖြစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါညွှန်ပြချက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပျမ်းမျှရွေ့လျားအသုံးပြုပုံဒါမှမဟုတ် MACD များ၏ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသောအလားတူကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများကို generate ရန်ဖြစ်ပါသည်။ Ichimoku ဇယားလိုင်းများအလားအလာသည်ဤမှားယွင်းသော breakouts များ၏အန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေ, ကျယ်ပြန့်ထောက်ခံမှုနှင့်ခုခံဒေသများအတွက်အချိန်အတွက်ရှေ့ဆက်ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။
နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့တိုတိုနှင့်အလယ်အလတ်သက်တမ်းကိုနိုင်ငံတကာချေးငွေများပေးနိုင်ရန်အတွက် 1946 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးများမှမှုကြောင့်တစ်ဦးကငွေကြေးအခြားငွေကြေးအဘို့အဖလှယ်မရနိုင်ပါ။ Inconvertible ငွေကြေးအထူးသဖြင့်မြင့်မားတဲ့မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ကုန်သွယ်ကနေ, သို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့်သတ်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါအမေရိကန်ဒေါ်လာအဆိုပါစုံတွဲကိုမကိုးကားငွေကြေး၏အခြေစိုက်စခန်းငွေကြေးအခါ an သွယ်ဝိုက်ကိုးကားသည်။ အဆိုပါအမေရိကန်ဒေါ်လာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစျေးကွက်အတွင်းကြီးစိုးငွေကြေးဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကကြောင့်များသောအားဖြင့်ခြေရင်းငွေကြေးနှင့်အခြားငွေကြေးအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်, ဥပမာဂျပန်ယန်းငွေသို့မဟုတ်ကနေဒါဒေါ်လာကောင်တာငွေကြေးအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။
စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုကိုတိုင်းတာတဲ့စီးပွားရေးညွှန်းကိန်း။ ဒါဟာလစဉ်အခြေခံပေါ်မှာယူအက်စ်အေ၏ Federal Reserve ဘုတ်အဖွဲ့ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်သတ္တုတွင်း, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် utilities များ၏ထုတ်လုပ်မှုအထွက်တိုင်းတာသည်။
ပါဝါ purchasing အတွက်လျှော့ချရေးကိုတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်စားသုံးသူကုန်စည်စျေးနှုန်းမြင့်တက်အဖြစ်သတ်မှတ်။
ကနဦး Margin လိုအပ်ချက်
ဒါဟာကနဦးရဲ့ margin ထက်လျော့နည်းသို့မဟုတ်ရရှိနိုင်သောအနားသတ်ညီမျှဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်မှာအသစ်တခုဖွင့်လှစ်အနေအထား, တည်ထောင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးအနားသတ်ချိန်ခွင်လျှာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ကနဦးရဲ့ margin လိုအပ်ချက် (ဥပမာ; အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာအနေအထားပမာဏ၏ 1%) ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်သြဇာအချိုးအစားအားဖြင့်တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။
Interbank Market က
အဆိုပါ interbank စျေးကွက် FX ကုန်သွယ်အတွက်သူတို့အချင်းချင်းနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်စျေးကွက်ကိုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ကုန်သည်တွေရဲ့ကောင်တာကျော်စျေးကွက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
ဤသည်ကိုအဓိကရောင်းဝယ်နှင့်အချင်းချင်းကုန်သည်အရောင်းအကြားပြုပြီအဖြစ်သရုပ်ဆောင်သည်နှောင်ကြိုး (သို့မဟုတ် OTC အနကျအဓိပ်ပါယျ) စျေးကွက်လည်ပတ်နေတဲ့အရစ်ကျကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ; အထွေထွေလူထုဆန့်ကျင်အဖြစ်သာ, ဈေးကွက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ခွင့်ပြုထားကြသူလန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်း, အဖွဲ့ဝင်များ။
ဒီဖြစ်စဉ်၏အကျိုးဆက်အဖြစ်, အတိုးနှုန်း differential ကိုနှစ်ယောက်ခုအကြားရှေ့ဆက်နဲ့အစက်အပြောက်ငွေလဲနှုန်းများအကြား differential ကိုတန်းတူဖြစ်ကြသည်။ အတိုးနှုန်းကွာခြားမှုနှုန်းကိုဆက်သွယ်: အတိုးနှုန်း, အစက်အပြောက်လဲလှယ်နှုန်းနှင့်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း။
နေ့ကိုအတွင်း FXCC တစ်ဦးကို client အားဖြင့် run ရာထူးအဖြစ်သတ်မှတ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အနီးကပ်များကနှစ်ထပ်။
ငွေပေးငွေယူနှုန်းတစ်အခကြေးငွေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌လျော်ကြေးပြန်မကြာခဏပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, ဒါမှမဟုတ် FXCC မှဖောက်သည်များမိတ်ဆက်တဲ့ဥပဒေရေးရာ entity, အဖြစ်ရည်ညွှန်း။ Introducers သူတို့ရဲ့ clients များထံမှ margin ရန်ပုံငွေများကိုလက်ခံခြင်းကနေတားဆီးလျက်ရှိသည်။
ဒါဟာငွေကြေး၏အုပ်စုတစုဟာသူတို့ရဲ့ငွေကြေးဖလှယ်ဈေးကွက်အတွက်ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအားအခြေအနေများခြွင်းချက်အခြားငွေကြေးမှဆွေမျိုးတို့ပူးတွဲရွှေ့ရှိရာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှဆွေမျိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့ကြားဆက်ဆံရေး, စောင့်ရှောက်ပေးသောအားဖြင့်တစ်ဦးသဘောတူညီမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာပါဝင်ဗဟိုဘဏ်တွေရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားငွေကြေးဝယ်ယူရောင်းချခြင်းမှတဆင့်ပူးတွဲ float ကိုထိန်းသိမ်းရန်။
ဤသည်ဂျပန်နိုင်ငံများအတွက်ဂျပန်ယန်း (JPY) အတွက်ငွေကြေးအတိုကောက်, ငွေကြေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါယန်း 100 sen, ဒါမှမဟုတ် 1000 Rin ပါဝင်သည်။ ယန်းမကြာခဏဗဟိုမှတဆင့်နှစ်ခုအလျားလိုက်လိုင်းနှင့်တကွ, မြို့တော်အက္ခရာ Y ကိုအားဖြင့် (ကသင်္ကေတအဖြစ်) ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရောင်းအထဲတွင်ရည်ညွှန်းအဖြစ်အသုံးပြုငွေကြေးအဖြစ်သတ်မှတ်နှင့်လဲလှယ်နှုန်းထား setting အခါ။ ဗဟိုဘဏ်တွေအရံအတွက်သော့ချက်ငွေကြေးစောင့်ရှောက်နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာသည်ကမ္ဘာ့အများဆုံးကြီးစိုး key ကိုငွေကြေးအဖြစ်ရှုမြင်သည်။
Keltner ချန်နယ် (KC)
အဆိုပါ Keltner Channel ကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့် created 1960 အတွက် Chester ဒဗလျူ Keltner ဖွငျ့နှင့်သူ၏စာအုပ် "Commodities အတွက်ငွေရှာရန်ကဘယ်လို" တွင် featured ခဲ့သည်။ Keltner လိုင်းများကွက်သုံးလိုင်းများ, တစ်ဦးပါဝင်သည်ဟု: အထက်နှင့်အောက်ပိုင်းခညျြအနှောနှင့်ဤရွေ့လျားပျမ်းမျှအားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအထက်တွင်ကြံစည်မှုနဲ့အတူရိုးရှင်းသောရွေ့လျားပျမ်းမျှအား။ တပ်သား (ထိုချန်နယ်ဖန်တီး) ၏အကျယ်သည်ပျမ်းမျှစစ်မှန်သော Range မှလျှောက်ထားအသုံးပြုသူတစ်ချိန်ညှိအချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဤရလဒ်မှဆက်ပြောသည်နှင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်လိုင်းရွေ့လျားအလယ်မှာကနေနုတ်ထားပါသည်။
သင့်ရဲ့ဖောက်သည်ကိုသိ, ဒီထိုကဲ့သို့သော FXCC အဖြစ်အရစ်ကျကုမ္ပဏီများအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်တစ်လိုက်နာမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးနီးပါးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းလဒ် (အားလုံးမဟုတ်ပါလျှင်), သူတို့ကဦးဆောင်လမ်းပြမထင်သော်လည်း, သူတို့ဥပမာငွေကြေးတစ်စုံတစ်ဦးအခြို့သောထုံးစံ၌ကငျြ့ပါမညျသောအထောက်အထားပူဇော်ကြပါဘူး။ အချို့ကအခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးရှေ့ကိုအရိပ်အယောင်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုပေးစေနိုင်သည်။ အနာဂတျမှာအလေ့အထများကိုဝယ်ယူစားသုံးသူတစ်စစ်တမ်းလက်လီကဏ္ဍ၏ကျန်းမာရေးညွှန်ပြလိမ့်မည်။ တစ်အိမ်ရာဆောက်လုပ်ရေးကိုယ်ခန္ဓာ၏တစ်ဦးကစစ်တမ်းကိုပိုမိုနေအိမ်များဆောက်လုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကတိကဝတ်အထောက်အထားပေးနိုငျသညျ။ အဆိုပါ CBOT စစ်တမ်းအတွက်ကတိကဝတ်ကုန်သည်များအခြို့သောဘဏ္ဍာရေးတူရိယာဝယ်ယူရန်နှင့်ကုန်သွယ်မှုရာ၌ခန့်ထားပြီဖော်ပြသည်။
ငွေပေးချေမှု၏တရားဝင်နည်းလမ်းအဖြစ်ပညတ်တရားအားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်သောသူမြားကို '' တိုင်းပြည်ငွေကြေး၏တန်ဖိုး။ အဆိုပါအမျိုးသားရေးငွေကြေးအများဆုံးနိုင်ငံများရှိနူးညံ့သောအခွင့်အာဏာခံရဖို့စဉ်းစားသည်နှင့်ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်အများပြည်သူတာဝန်ယူမှုကိုပေးဆောင်ဖို့အဖြစ်ဘဏ္ဍာရေးကတိကဝတ်တွေ့ဆုံရန်အသုံးပြုသည်။ တစ်ဦးကကြွေးရှင်တစ်ဦးကြွေးမြီ၏ပြန်ဆပ်ဆီသို့ဦးတည်ဥပဒေရေးရာနူးညံ့သောလကျခံဖို့တာဝန်ရှိသည်ဟုဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေရေးရာကိုနူးညံ့ထိုကဲ့သို့သောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဗြိတိန်၌အင်္ဂလန်၏ဘဏ်အဖြစ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအမျိုးသားခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်ပေးသည်။
တာဝန်ယူမှုဟာ counterparty ဖို့အနာဂတ်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောရက်စွဲမှာငွေကြေးကိုတစ်ဦးငွေပမာဏကိုကယ်နှုတ်တော်မူရန်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကန့်သတ်ချက်အမိန့်တစ်ဦး Pre-defined စျေးနှုန်းမှာစျေးကွက်ဝင်တစ်ဦးကုန်သွယ်မှုနေရာကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ စျေးကွက်စျေးနှုန်းကို pre-set စျေးနှုန်းရောက်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်အမိန့်ဟာဖော်ပြထားန့်သတ်ချက်စျေးနှုန်းမှာ (ကန့်သတ်ချက်အမိန့် order ကိုကွပ်မျက်မည်ဖြစ်ကြောင်းအာမမခံ) ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာကြောင့်စျေးကွက်ကန့်သတ်စျေးနှုန်းရောက်ရှိချက်ချင်းအနည်းငယ်သာအသံအတိုးအကျယ်ကုန်သွယ်အတူပြန်ကန့်သတ်စျေးနှုန်းအဆင့်ကနေခြင်္သေ့သောစျေးကွက်အတွင်းမတည်ငြိမ်မှုရန်, ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့နောက်ကန့်သတ်မိန့်ကိုဖြစ်ပေါ်မည်မဟုတ်ပါနှင့် client ကိုဆန္ဒအလျောက်အမိန့်ဖျက်သိမ်းသည်အထိကြောင့်ကွပ်မျက်ခံရသို့မဟုတ်နိုင်ပါသည်အချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်အကျိုးသက်ရောက်မှာကျန်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
ဒါကကန့်သတ်မိန့်ကိုအားမရသည့်အခါ client ကိုသတ်မှတ်ပါတယ်သောစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်အလွယ်တကူကိုးကားစျေးနှုန်းများကိုဝယ်, ဒါမှမဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်ပေါ် (သို့မဟုတ်နီးစပ်) တူရိယာရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက်ကုန်သွယ်ခံရပမာဏ၏လုံလောက်သောငွေပမာဏအရပ်၌ဈေးကွက်ထဲမှာအခြေအနေကိုဖြစ်ပါတယ်။
ကြောင်း offset တစ်ဦးငွေပေးငွေယူအဖြစ်သတ်မှတ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကိုယခင်ကထူထောင်အနေအထားထုတ်ပိတ်။
client ကိုရဲ့အကောင့်ကိုဖွင့်ရာထူးကျင်းပရန်လုံလောက်သောရံပုံငွေမရှိပါကပြီးတာနဲ့ဖျက်သိမ်းမှုပေးထားသောအချိန်ကမရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာရာထူးဖွင့်လှစ်ဖျက်သိမ်းပြီးတံ့သောတိကျတဲ့အကောင့်အဆငျ့အပေါ်အခြေခံပြီးပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်။ တစ်ဦးက client ကိုအကောင့်သို့အပိုဆောင်းရဲ့ margin depositing အသုံးပြုပုံသို့မဟုတ်တည်ဆဲပွင့်လင်းအနေအထား (s) ကိုထုတ်ပိတ်နေဖြင့်၎င်းတို့၏အကောင့်များနှင့်ရာထူး၏ဖျက်သိမ်းမှုတားဆီးနိုင်ပါတယ်။
လန်ဒန်ရွှေရေကန် (Scotia-Mocatta, Deutsche ဘဏ်, Barclays Capital မှ, Societe General မှနှင့် HSBC က) ၏ညီလာခံခေါ်ဆိုခများ၏ရလဒ်အဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သောရွှေကဲ့သို့အဖိုးတန်သတ္တုများ၏အောင်စနှုန်းစျေးနှုန်း, ငွေ, ပလက်တီနမ်နှင့်ပယ်လေဒီယမ်ကိုနေ့စဉ်အပေါ်သတ်မှတ် 10 မှာအခြေခံ: 30 (လန်ဒန်နံနက်ပြင်ဆင်ချက်) နှင့် 15: 00 ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် (လန်ဒန်ညနေပြင်ဆင်ချက်) ။ လန်ဒန်အစက်အပြောက်ပြင်ဆင်ချက်စျေးနှုန်းညီလာခံခေါ်ဆိုခ Terminator တစ်ချိန်က fixed ခံရဖို့စဉ်းစားသည်။
တစ်ဦးကို client တစ်ဦးငွေကြေးကို pair တစုံဝယ်အသစ်တခုအနေအထားဖွင့်လှစ်သောအခါ, သူ '' ရှည်သော '' သှားသောစဉ်းစားသည်။
အဆိုပါအမေရိကန်ဒေါ်လာ / CAD ငွေကြေးကို pair တစုံဘို့ကားရောင်းဝယ်ရေးနှင့်ဘန်းစကားအသုံးအနှုန်း။
တစ်ဦးငွေပေးငွေယူ၏တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာဖို့အသုံးပြုတဲ့ယူနစ်အဖြစ်သတ်မှတ်။ အရောင်းအမဟုတ်ဘဲသူတို့ရဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးအထကျ, ကုန်သွယ်စာရေးများ၏အရေအတွက်အားဖြင့်ရည်ညွှန်းကြသည်။ ဒါဟာ 100,000 ယူနစ်တစ်ခုအမိန့်ကိုရည်ညွှန်းစံကုန်သွယ်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ပျမ်းမျှ Convergence နှင့်မတူကွဲပြား Moving MACD,
ကို Maintenance Margin
ဒါက client ကိုဖွင့်လှစ်စောင့်ရှောက်, ဒါမှမဟုတ်ပွင့်လင်းအနေအထားကိုဆက်ထိန်းနိုင်ဖို့အတွက် FXCC မှာရှိရမည်ဖြစ်သောလိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးအနားသတ်ဖြစ်ပါသည်။
ဗိုလ်မှူးအားလုံးအတွက်ထိုကဲ့သို့သော EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ, အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY, GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ, အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CHF အဖြစ်အများစုက Forex ဈေးကွက်ထဲမှာကုန်သွယ်ဖြစ်ကြောင်းငွေကြေးအားလုံးမှရည်ညွှန်းသည်။ ဤရွေ့ကားကိုအဓိကငွေကြေးအားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Forex စျေးကွက်မောင်းသောဤအားလုံးအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့် "ကုန်စည်အားလုံး" အဖြစ်လူသိများကြသည်ဖြစ်သော်လည်းအဆိုပါအမေရိကန်ဒေါ်လာ / CAD နှင့် AUD / အမေရိကန်ဒေါ်လာအားလုံးအတွက်လည်းဗိုလ်မှူးအဖြစ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာဥပမာတစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက်တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေး, ငှားရမ်းဖို့လာသောအခါအလားတူနည်းလမ်းအတွက် client များ '' အကောင့်ပေါ်တွင်အခကြေးငွေကုန်သွယ်မှုများအတွက်တစ်ဦးကငွေမန်နေဂျာအလိုတော်ကိုအသုံးပြုမယ့်အသုံးအနှုန်း, equity ဖြစ်ပါတယ်။
ဖောက်သည် '' margin အဆင့် FXCC အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားအဖြစ်% 100 မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်သည့်အခါ margin ခေါ်ရန်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ Client အအနားသတ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ထဲကကိုရှောင်ကြဉ်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအမြတ်အစွန်းအရောင်းပိတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်နိုင်ရန်အတွက်ပိုပြီးရန်ပုံငွေများကိုထည့်သွင်းရန် option ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ margin နဲ့သြဇာအပြန်အလှန်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအနားသတ်အမည်ရယင်းသြဇာအောက်, မြင့်
တစ်ခုဖွင့်လှစ်အနေအထားနှင့်အပြန်အလှန်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်သည်။ သင်္ချာနည်းအထုတ်ဖော်ပြောဆို; အနားသတ် = ပွင့်လင်းအနေအထားကို / အများဆုံးကုန်သွယ်သြဇာအချိုးအစား။ ဥပမာ; 100,000 အများဆုံးကုန်သွယ်သြဇာအချိုးမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ / CHF 100 အမေရိကန်ဒေါ်လာအနေအထား: 1, 100,000 / 100 သို့မဟုတ် $ 1,000 ညီမျှကတိပြုအနားသတ်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ, ခြေရင်း (ပထမ) ငွေကြေး (ဥပမာ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ, GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ) နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင် (EUR / JPY, GBP / JPY) မရှိ, ကောင်တာငွေကြေးပမာဏကိုပထမအမေရိကန်ဒေါ်လာသို့ကူးပြောင်းသည်အဘယ်မှာရှိငွေကြေးကိုအားလုံးအတွက်များအတွက်အမြတ်တွက်ချက်ရန် ပျမ်းမျှငွေလဲနှုန်း (s) ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်။ ဥပမာအား; စျေးနှုန်း 1 အခါဖောက်သည်တစ်ဦး, EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏ 1.0600 အများကြီးဝယ်ယူလျှင်။ ထို့ကြောင့်, 100,000 EUR 100,600 အမေရိကန်ဒေါ်လာညီမျှ။ $ 100,600 / 100 သြဇာအချိုး = $ 1,006.00
အဆိုပါအသုံးအနှုန်းအစက်အပြောက် Forex ပွဲစားများအဘို့သောကြာနေ့5pm တွင် EST သောစျေးကွက်ပိတ်သည့်အခါနေ့၏တိကျသောအချိန်များအတွက်အသုံးပြုသည်။
ဒါဟာတိကျတဲ့တူရိယာများအတွက်စျေးကွက်အတွင်းဝယ် / ရောင်းအမိန့်ပြသထားတယ်။
Market က Execution
ယေဘုယျအားဖြင့် STP နှင့် ECN brokerage အသုံးပြုသော, ဒီတစ်ကုန်သည် terminal ကို၏ screen ပေါ်မှာလေ့လာတွေ့ရှိစျေးနှုန်းရရှိရန်အာမခံမထားဘူးသော်လည်း, ကုန်သွယ်ရေးကွပ်မျက်ခံရဖို့အာမခံချက်အခါသေဒဏ်စီရင်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သေဒဏ်စီရင်၏ဤအမျိုးအစားနှင့်မ Re-ကိုးကားရှိပါတယ်။
တစ်ဦးကစျေးကွက်အမိန့်ဟာလက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးမှာတစ်ဦးကိုရှေးခယျြငွေကြေးတစ်စုံကိုဝယ်, ဒါမှမဟုတ်ရောင်းဖို့အမိန့်အဖြစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Market ကအမိန့်အသုံးပြုသူကို 'ဝယ်ယူ / ရောင်း' ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ယခုအချိန်တွင်ပြသစျေးနှုန်းမှာကွပ်မျက်ခံရနေကြသည်။
ဒါဟာတဦးတည်းငွေကြေးအစစ်အမှန်အချိန်အတွက်အခြားများအတွက်လဲလှယ်နိုင်သည့်များအတွက်ငွေကြေးအားလုံး '' လက်ရှိကိုးကားသည်။
ဒါဟာရလဒ်အဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏တန်ဖိုးအတက်အကျမှဖြစ်ပေါ်စေသည်ပေးသောစျေးကွက်တပ်ဖွဲ့များထံမှပေါ်ထွန်းနိုငျသောစွန့်စားမှု, ဥပမာ, ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအား, ကိုရည်ညွှန်းသည်။
သြဇာအသစ်တစ်ခုအနေအထားဖွင့်လှစ်ရရှိနိုင်မယ့်အချိုးအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးတည်းကနဦးအပ်ငွေကသူတို့ကိုခွင့်ပြုမယ်လို့ထက်ကုန်သည်များပိုမိုမြင့်မားတဲ့ volume အရောင်းနှင့်အတူစျေးကွက်ဝင်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဥပမာ; 100 တစ်သြဇာအချိုး: 1 အနားသတ်၏ $ 100,000 ($ 1,000 / 100,000 = $ 100) နဲ့တစ်ဦးကို client တစ်ခု $ 1,000 တွေအများကြီးအနေအထားကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒါဟာအခြေခံငွေကြေး၏ 1,000 ယူနစ်ညီမျှကြောင်းကုန်သွယ် Forex အတွက်အသေးဆုံးစာချုပ်ယူနစ်အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်။
micro အများကြီးသေးငယ်နှစ်တိုးအတွက်ကုန်သွယ်မှုကြောင့်သိသိသာသာသူတို့၏အန္တရာယ်လျှော့ချဖို့အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောကုန်သည်များကို enable ။
အသေးစားအကောင့်မှာတော့ client များဟူမူကား, ဤအကောင့်အမျိုးအစားသူတို့သေးငယ်တဲ့ပမာဏသာရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်ရှိရာအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောကုန်သည်များအကြားအများအားဖြင့်ရေပန်းစားသည်, မိုက်ခရိုစာရေးကုန်သွယ်မှုနိုင်ကြသည်။
Mini ကို Forex အကောင့်
ဒါကအကောင့်အမျိုးအစား 1 / 10 စံတွေအများကြီး၏အရွယ်အစား၏ရာထူးနှင့်အတူစျေးကွက်ဝင်မှကုန်သည်များနိုင်ပါတယ်။
Mini ကိုတွေအများကြီးတဦးတည်း PIP ၏တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာအခြေစိုက်လျှင်ဘယ်မှာ 0.10 ၏ငွေကြေးကိုကုန်သွယ်အရွယ်အစား $ 1 မှညီမျှပါတယ်။
မိုင်းနားငွေကြေးအားလုံး, သို့မဟုတ် "အရွယ်မရောက်သေးသူ" တခြားငွေကြေးအားလုံးနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ငွေကြေးရှိရေး။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ကအကြီးအကျယ်ကုန်သွယ်နှင့်ပြန့်ပွားတသမတ်တည်းအနိမ့်ဖြစ်ခြင်းခံနေရသည့်ကြားမှတစ်အသေးစားငွေကြေးတစ်စုံအဖြစ်ဗြိတိန်ရဲ့ပေါင် (EUR / GBP) ဆန့်ကျင်ယူရိုခွဲခြားလိမ့်မယ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (NZD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ) သာရှိပြီးပြည်ပမှအဆိုပါနယူးဇီလန်ဒေါ်လာကိုလည်းကိုလည်း "ကုန်စည် pair တစုံ" အဖြစ်တနျးခံရပေမယ့်အသေးစားငွေကြေးတစ်စုံအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ '' မှန်ကုန်သွယ်ရေး '' သည်အခြား Forex ကုန်သည်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှခွင့်ပြုမယ့်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာအခြေခံအားဖြင့်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်အကောင့်ထဲမှာထင်ဟပ်ပါလိမ့်မယ်သောအခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများများ၏အရောင်းအကော်ပီကူးမယ်။
ပိုက်ဆံ Market ကခြံ
ပိုက်ဆံစျေးကွက်ခြံငွေကြေးလှိုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်တစ်လမ်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတာတဲ့အခါကုမ္ပဏီငွေကြေးအန္တရာယ်လျှော့ချရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ဦးငွေပေးငွေယူပို့ချခြင်းမပြုမီ, နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီငွေကြေး၏တန်ဖိုးသည်အနာဂတ်ငွေပေးငွေယူ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုအာမခံမှသကဲ့သို့အတွက်သော့ခတ်နှင့်ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတတ်နိုင်နှင့်ဆပ်ဖို့ဆန္ဒရှိစျေးနှုန်းရပါလိမ့်မယ်သေချာပါလိမ့်မည်။
Moving ပျမ်းမျှ (MA)
တန်ဖိုးဒေတာအကွာအဝေး၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းယူခြင်းအားဖြင့်စျေးနှုန်း / နှုန်းမှာဒေတာအစုတခုချောမွေ့တဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်။
ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ Market က
ဈေးကွက်ထဲမှာအနိမ့်ငွေဖြစ်လွယ်ပေမယ့်စျေးနှုန်းနှင့်မြင့်မားသောပြန့်ပွား၌ကြီးသောလှိုလည်းမရှိတဲ့အခါဒီတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျဉ်းမြောင်းသောဈေးကွက်ထဲမှာယေဘုယျအားဖြင့်လေလံ / ကမ်းလှမ်းမှုကိုမေး၏အနိမ့်အရေအတွက်ကလည်းမရှိ။
တစ်ဦးအနေအထားညတွင်းချင်းကျော် (Swap) ကိုလှိမ့များ၏အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးစီးပွားအဖြစ်သတ်မှတ်။
ပုံစံဖွဲ့စည်းမှု charting ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးဦးခေါင်းနှင့်ပခုံးသို့မဟုတ်ယင်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်များ၏အခြေစိုက်စခန်း။
Net ကအတိုးနှုန်း Differential
ဤသည်မှာနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားငွေကြေး၏နိုင်ငံများထံမှအတိုးနှုန်းအတွက်ကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်သည် EUR / USD ဖြင့်ရှည်လျားသည်ဆိုပါကဥပမာ, ထို့နောက်သူသည်ယူရိုပိုင်ဆိုင်နှင့်အမေရိကန်ငွေကြေးချေးဖြစ်ပါတယ်။ ယူရိုငွေကြေးများအတွက်အစက်အပြောက်လာမယ့်နှုန်းကို 3.25% ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အမေရိကန်အတွက်အစက်အပြောက် / လာမယ့်နှုန်းကို 1.75% ဖြစ်ပါသည်, ထို့နောက်အတိုး differential ကို 1.50% သည်ဆိုပါက (3.25% - 1.75% = 1.50%) ။
Net ကအနေအထားကိုတန်းတူအရွယ်အစားတစ်ဦးအနေအထားအားဖြင့် counterbalanced မထားဝယ်သို့မဟုတ်ရောင်းချပမာဏဖြစ်သည်။
ဒါဟာပိုင်ဆိုင်မှုအနုတ် liabilities အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဒါ့အပြင်အဖြစ်အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။
8 အကြားထရေးဒင်း session တစ်ခု: 00 AM EST '' 5: 00 pm တွင် EST ။ (နယူးယောက်အချိန်) ။
မကြာခဏ updated အကြောင်းအရာနှင့်သုံးစွဲသူများကပေးဘို့ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းများတွင်အသုံးပြုတဲ့ဒေတာကို format နဲ့အဖြစ်မှတ်။
အဘယ်သူမျှမအပေးအယူ Desk (NDD)
FXCCa"ကိုအဘယ်သူမျှမဖောက်စားပွဲပေါ်မှာ" Forex ပွဲစားဖြစ်ပါတယ်။ NDD နိုင်ငံခြားငွေကြေးကုန်သွယ်ကြသည်ရှိရာ interbank စျေးကွက်မှအတားအဆီးမရရှိမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ Forex ပွဲစားများမဟုတ်ဘဲတစ်ခုတည်းငွေဖြစ်လွယ် provider ကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းထက်, စျေးကွက်ငွေဖြစ်လွယ်ပေးသူမှတဆင့်ဒီ model လမ်းကြောင်းအမိန့်ကိုသုံးနိုင်သည်။ တစ်ဦးကကုန်သည်ရဲ့အမိန့်ကိုအများဆုံးယှဉ်ပြိုင်လေလံရစျေးနှုန်းတွေကိုတောင်းနိုင်ဖို့အတွက်မြောက်မြားစွာပံ့ပိုးပေးကမ်းလှမ်းနေသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအများစုများအတွက်လုပ်ခလစာအချက်အလက်များကိုက်ညီသည့်အလုပ်သမားစာရင်းအင်းအမေရိကန်ဗျူရိုကကိုစုဝေးစေစာရင်းအင်းဒေတာ။ ဒါဟာမပါဝင်ပါဘူး: လယ်ယာလုပ်သားများ, ပုဂ္ဂလိကအိမ်ထောင်စုန်ထမ်း, ဒါမှမဟုတ် Non-အမြတ်အဖွဲ့အစည်းကဝန်ထမ်း။ ဒါဟာလစဉ်ဖြန့်ချိမယ့်အခြေခံညွှန်းကိန်းဖြစ်ပါတယ်။
အယူအဆ Value ကို
NZD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ဒါဟာနယူးဇီလန်ဒေါ်လာများအတွက်အတိုကောက်နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေကြေးကို pair တစုံပါပဲ။ ဒါဟာကုန်သည်များဖို့ရန်လိုအပ်ကြောင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာပမာဏမဟုတ်တဦးတည်းနယူးဇီလန်ဒေါ်လာသရုပျဖျော။ အဆိုပါ NZD / အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေကြေးကို pair တစုံအရောင်းအဝယ်ဖြစ်မကြာခဏ "ဟုအဆိုပါ Kiwi အရောင်းအဝယ်ဖြစ်" အဖြစ်ရည်ညွှန်းတယ်။
OCO မိန့် (တအခြားသောအမိန့် Cancel)
ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် Market က
ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ယာယီသည်နှင့်တစ်ဦးတူရိယာရောင်းကုန်သည်အရေအတွက်ကဝယ်ယူရန်ဆန္ဒရှိကုန်သည်အရေအတွက်ကထက်ကျော်လွန်ရှိရာဖြစ်ပျက်မှုကိုကိုယ်စားပြုသော Forex ဈေးကွက်အတွက်ပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Threadneedle လမ်း၏ဟောငျးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်, အင်္ဂလန်၏ဗဟိုဘဏ်တစ်ခုဝေါဟာရကို။
ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီအကောင့်များနှင့်အရောင်းအကာ omnibus အကောင့်ထဲမှာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးထက်သီးခြားစီ designated ရာနှစ်ခုပွဲစားများကြားတွင်အကောင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာကုန်သည်အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူ၏နာမတော်အတွက်အပေးအယူများနှင့်စစ်ဆင်ရေး၏အပြောင်းအလဲနဲ့ဖျော်ဖြေကြသည်ရှိရာအခြားကုမ္ပဏီနှင့်အတူဤအကောင့်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
တပါးအမျိုးသားတို့သည် '' ငွေကြေးများ၏ငွေလဲလှယ်ခွင့်ပြုထားတဲ့အွန်လိုင်း system အဖြစ်သတ်မှတ်။ Forex ဈေးကွက်ကျတ်နှင့်ကုန်သွယ်သည့်ငွေကြေး၏ပေးပို့ဘို့ခွင့်ပြုကြောင်းဘဏ်များ, အွန်လိုင်းငွေကြေးဖလှယ်မှုနှင့် Forex ပွဲစားများချိတ်ဆက်ကွန်ပျူတာကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ပွင့်လင်းနေသောသူအပေါင်းတို့သည်လက်ရှိ Client ကိုရာထူးပြရသော FXCC ပြတင်းပေါက်။
အမိန့် (s) ကို
အမိန့် FXCC ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းမှတဆင့်တိကျတဲ့ငွေကြေးတစ်စုံကိုဝယ်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်ဖြစ်စေ client ကိုတစ်ဦးထံမှညွှန်ကြားချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ စျေးကွက်စျေးနှုန်းကို client ရဲ့ Pre-စိတ်ပိုင်းဖြတ်စျေးနှုန်းရောက်ရှိတစ်ချိန်ကအမိန့်, အဖြစ်ကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်ခံရဖို့သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
OTC margin နိုင်ငံခြားသုံးငွေ
အနားသတ်ထူးချွန်ရာထူးဆန့်ကျင်အပ်နှံခြင်းနှင့်ကတိပြုထားတဲ့များအတွက်ထိုကဲ့သို့သော FXCC နှင့် client ကဲ့သို့စျေးကွက်သင်တန်းသားများကို, တိုက်ရိုက်အချင်းချင်းပုဂ္ဂလိကပိုင်ညှိနှိုင်းစာချုပ်များသို့မဟုတ်အခြားအရောင်းအထဲသို့ဝင်ရသောနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစျေးကွက်, (လဲလှယ်ချွတ်) ကိုတန်ပြန်ကျော်။
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဟာတန်ဖိုးရှိရှိစွမ်းရည်နှင့်အတူထောက်ခံမရနိုငျသောကြီးထွားလာစုစုပေါင်းဝယ်လိုအားအတွက်ရရှိလာတဲ့, အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအတွင်းအကောင်းတစ်ဦးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုရှိပါတယ်သည့်အခါတစ်ဦးဖြစ်ပျက်မှုအရာအများအားဖြင့်တိုးမြှင့အတိုးနှုန်းနှင့်အဆင့်မြင့်ငွေဖောင်းပွမှုအတွက်ရလဒ်တွေကိုအဖြစ်, အပူလွန်စီးပွားရေးကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းဥပမာအားဖြင့်, အခြားပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းကိုက်ညီသည့်အခါ parity ဖြစ်ပေါ်; တဦးတည်းယူရိုတစ်ဦးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာညီမျှလျှင်။ နှစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုညီမျှတန်ဖိုးကိုရှိပါကတစ်ဦးက "ကွာခြားမှုနှုန်းစျေးနှုန်း" အယူအဆကိုလည်းအာမခံနှင့်ကုန်စည်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ Convertible နှောင်ကြိုးကုန်သည်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက equity သို့နှောင်ကြိုးပြောင်းအကျိုးရှိသောင်သည့်အခါဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာ, ထိုကွာခြားမှုနှုန်းစျေးနှုန်း concept ကိုအသုံးပွုရပေလိမ့်မည်။
တစ်ဦးက PIP ပေးထားသောငွေလဲနှုန်းစျေးကွက်စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုအပေါ်အခြေခံပြီးစေသည်သောအသေးဆုံးစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ အများစုမှာအဓိကငွေကြေးအားလုံးအသေးဆုံးအပြောင်းအလဲနောက်ဆုံးဒဿမ point ရဲ့ကြောင်းလေးဒဿမသောနေရာများမှစျေးနှုန်းနေကြသည်။ အများဆုံးအားလုံးအတှကျ, ဒီ 1%, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအခြေခံအချက်၏ 100 / 1 ၏ညီမျှသည်။
ကုန်သည်ရဲ့အကောင့်ငွေကြေးကိုသို့ကူးပြောင်းသောပေးထားသောကုန်သွယ်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ PIP များ၏တန်ဖိုးရှိ။
PIP တန်ဖိုးကို = (တဦးတည်း PIP / လဲလှယ်မှုနှုန်း) ။
ဒါကမတည်မငြိမ်အမိန့်နေဆဲဆိုင်းငံ့နှင့် client ကိုဆုံးဖြတ်စျေးနှုန်းမှာကွပ်မျက်ခံရခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေအဖြစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်အနေအထားတခုတခုအပေါ်မှာဆန့်ကျင်အကျိုးဆက်ရှိစေခြင်းငှါအစိုးရမူဝါဒအပြောင်းအလဲများမှ exposure ။
ပေးထားသောငွေကြေးအတွက်သွင်းယူစုစုပေါင်းကတိကဝတ်အဖြစ်သတ်မှတ်။ တစ်ဦးကအနေအထားကိုပြားချပ်ချပ်, ဒါမှမဟုတ်စတုရန်း (မျှထိတွေ့ခြင်း), တာရှည်, (ပိုပြီးငွေကြေးရောင်းလိုက်သောထက်ဝယ်), သို့မဟုတ်အတိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် (အသေးစိတ်ငွေကြေးဝယ်ထက်ကိုရောင်း) ။
Net ကအပြုသဘောနေ့ချင်းညချင်းကိုဖွင့်မယ့်အနေအထားကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း၏ (Swap) စိတ်ဝင်စားမှု။
ပေါင် Sterling (Cable ကို)
အဆိုပါ GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်စုံအခြားကိုးကား။
စျေး Channel ကို
စျေးချန်နယ်အလိုရှိသောတူရိယာများအတွက်ဇယားအပေါ်နှစ်ခုအပြိုင်လိုင်းများအားမရဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ စျေးကွက်၏လှုပ်ရှားမှုရှိမရှိပေါ်မူတည်ပြီး channel ကိုဆင်းသို့မဟုတ်အလျားလိုက်, တက်နိုင်ပါတယ်။ လိုင်းများမြင့်နှင့်အထက်လိုင်းတော်လှန်ရေးအဆင့်ကိုကိုယ်စားပြုသည်နှင့်အနိမ့လိုင်းထောက်ခံမှုအဆင့်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်ရှိရာမကြုံဘူး, ချိတ်ဆက်ဖို့အသုံးပြုကြသည်။
ဤသည်စျေးကွက်အချက်အလက်များ၏စီးဆင်းမှုဖြစ်ပါတယ် (အစစ်အမှန်အချိန်, ဒါမှမဟုတ်နှောင့်နှေး) ။
PPI အစီအမံမြို့တော်တစ် fixed ခြင်းတောင်းများလက္ကား level မှာစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲထုတ်လုပ်သူများအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားငှားစားသုံးသူကောင်းသောထုတ်လုပ်မှုနှင့်လာမည့်လက်လီစျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုတစ်ခုညွှန်ပြချက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
အမြတ်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးအနေအထား၏ပိတ်ပွဲသို့မဟုတ် unwinding ။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ၏စီးပွားရေးတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကိုတိုင်းတာတဲ့စီးပွားရေးညွှန်းကိန်း။ ခန့်၏လစဉ်စစ်တမ်းများစုဆောင်းခြင်းအားဖြင့်။ အမှုဆောင်အရာရှိ purchasing 300 ကြောင့်မန်နေဂျာများအတွက် tool ကိုအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်စီးပွားရေးအခြေအနေများနှင့်အပြုမူသောအမှုသတင်းအချက်အလက်များပေးပါသည်။
PSAR, Parabolic Stop နှင့်ပြောင်းပြန် (SAR)
ဒါဟာရေတိုနှင့်တာရှည်ရာထူးများအတွက်ကပ်တွယ်မှုကိုမှတ်တိုင်များသတ်မှတ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်ညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ SAR system ကိုအောက်ပါတစ်လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါလေလံပါဝင်ပါသည်နှင့်တစ်ဦးငွေကြေးကို pair တစုံကိုတောင်း။
ကုန်သွယ် Forex ငွေကြေးအားလုံးပါဝငျသညျအတိုငျး, ကိုးကားငွေကြေးတစ်စုံအတွက်ဒုတိယငွေကြေးကိုယ်စားပြုတယ်။
ဥပမာ; EUR / GBP အတူဗြိတိန်ရဲ့အပေါင်ကိုးကားငွေကြေးနှင့်ယူရိုခြေရင်းငွေကြေးဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ကိုးကားမှာကိုးကားငွေကြေးအမြဲတမ်းနိုင်ငံခြားငွေကြေးဖြစ်ပါတယ်။ သွယ်ဝိုက်ကိုးကားမှာကိုးကားငွေကြေးအမြဲတမ်းပြည်တွင်းငွေကြေးဖြစ်ပါတယ်။
range ပေးထားသောအချိန်ကာလအတွင်းမြင့်နှင့်တစ်ဦးငွေကြေးကိုအနာဂတ်စာချုပ်သို့မဟုတ်အညွှန်းကိန်းများ၏အနိမ့်စျေးနှုန်းအကြားကွာခြားချက်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစပိုင်ဆိုင်မှုစျေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတစ်ခုအရိပ်အယောင်ဖြစ်ပါတယ်။
range ကုန်သွယ်စျေးနှုန်း၏အောက်ခြေအနီးလျှင် မူတည်. တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ကုန်သည်ဝယ်သို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းနှင့်တူရိယာတစ်ခုခုကို၏ဆုံးဖြတ်ချက်စေရန်ခွင့်ပြု, စျေးနှုန်းတစ်ရုပ်သံလိုင်းအတွင်း fluctuates နှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးသောအခါ, အဓိကအထောက်အပံ့နှင့်ခုခံရေးအဆင့်ဆင့်ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်သတ်မှတ်ဖေါ်ပြ ချန်နယ်သို့မဟုတ်ထိပ်အနီး။
သဘောပေါက် P ကို ​​/ L ကို
အခြို့သောဝန်ဆောင်မှု (ဥပမာ Forex ကော်မရှင် / ပြန့်ပွားကိုပြန်) အတွက်မူရင်းငွေပေးချေမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပြန်အမ်းငွေအဖြစ်သတ်မှတ်။
ဆိုင်ရာဥပဒေ Market က
တိုင်းပြည်များတွင်စျေးနှုန်းများတိုးချဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအတူတူပင်အချိုးကျမှုနှုန်းမှာတူညီတဲ့ထုတ်ကုန်များအတွက်ကွဲပြားစေခြင်းငှါအခါ။ စျေးနှုန်းကွာခြားချက်များအတွက်အကြောင်းပြချက်များပါဝင်သည်နိုင်: အခွန်ငွေ, သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်နှင့်ထုတ်ကုန်ရဲ့အရည်အသွေးကှဲလှဲ။
သြစတြေးလျ၏ Reserve Bank သည် (RBA)
နယူးဇီလန်၏ Reserve Bank သည် (RBNZ)
တစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးအခြို့သောစျေးနှုန်းမှာတစ်ကုန်သွယ်မှုစတင်ပေမယ့်ပွဲစားတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကိုးကားအတူတောင်းဆိုမှုကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအခါဖြစ်ပေါ်ရသောတစ်ဦးကစျေးကွက်အခွအေနေ။ FXCC client အားလုံးအတူတူပင်အရည်စျေးကွက်နှင့်အရောင်းအဖို့အတူတူပဲ access ကိုရယူထားတဲ့အတွက်အရည် Forex ECN မော်ဒယ်တိုက်ရိုက် access ကိုနှင့်အတူ၎င်း၏ client များမဆိုနှောင့်နှေးသို့မဟုတ်ပြန်လည် -quotes ခြင်းမရှိဘဲ, ချက်ချင်းကွပ်မျက်ခံရနေကြသည်ပေးပါသည်။
ငွေကြေးဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များမှကျင်းပငွေကြေး, ကုန်စည်, သို့မဟုတ်အခြားဘဏ္ဍာရေးမြို့တော်: မကြာခဏ "သိုက်" ဒီစဉ်းစားနိုင်အဖြစ်ရည်ညွှန်း။ ဥပမာ; , ကုန်သွယ်ရေးမညီမျှမှု FX အတက်အကျများ၏သက်ရောက်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ဗဟိုဘဏ်တစ်ခုလွှတ်ငြိမ်းစေရှိပါတယ်အခြားမည်သည့်ကိစ္စများဖြေရှင်းရန်: ဗဟိုဘဏ်ငွေကြေးနိုင်ရန်အတွက်သိုက်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ reserve ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုများသောအားဖြင့်အရည်များနှင့်တိုက်ရိုက်ငွေကြေးအခွင့်အာဏာရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိပါတယ်။
ဒါဟာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများတွင်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသွားမယ့်နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းကိုတစ်လှုပ်ရှားမှုကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်တဲ့စျေးနှုန်းဒါမှမဟုတ်အဆင့်ကိုဖြစ်စေတတ်၏။ အဆင့်ချိုးဖောက်လျှင်, ထို့နောက်ကတူရိယာစျေးနှုန်းပိုမိုမြင့်မားသွားဆက်ပြီးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
လက်လီနိုင်ငံခြားသုံးငွေရောင်းဝယ်ရေး - RFED
over-the-counter ဝယ်သို့မဟုတ်ရောင်းချနေဘဏ္ဍာရေးတူရိယာကိုမဆိုဖလှယ်မှုပါဝင်ပါဘူးဘယ်မှာကိစ္စများတွင်တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများတန်ပြန်ပါတီအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ RFED အနာဂတ်စာချုပ်များ, အရည်အချင်းပြည့်မီစာချုပ်သင်တန်းသားများမဟုတ်သောသင်တန်းသားများကိုနှင့်အတူအနာဂတ်ကန်ထရိုက်နဲ့ options စာချုပ်များအပေါ် options များပါဝင်သောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာဆောင်ရွက်သည်။
လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံ & လက်လီကုန်သည်
တစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ / ကုန်သည်သူ / သူမ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်အတွက်အာမခံ, CFDs, ငွေကြေး, equity, etc ဝယ်ယူသို့မဟုတ်ရောင်းသောအခါသူ / သူမတစ်ဦးလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ / ကုန်သည်ဖြစ်စဉ်းစားသည်။
ဒါဟာလက်လီကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ CPI ကအပြင်, RPI လည်းပေးထားသောတိုင်းပြည်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုတစ်ခုတိုင်းတာသည်။
ဤရွေ့ကား (ကာလ၌အချက်ထံမှ) စျေးကွက်ငွေကြေးနှုန်းထားများအမြတ်ဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်ရန်ငွေကြေးကုန်သည်တွေကအခြေစိုက်စခန်းတန်ဖိုးကိုအဖြစ်အသုံးပြု, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းနေ့၌သဘောပေါက်ထားပြီးဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ revaluation နှုန်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ယခင်ကုန်သွယ်နေ့၏ပိတ်ပွဲမှုနှုန်းဖြစ်ဖို့စဉ်းစားသည်။
နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းကို၏မမေး, ဒါမှမဟုတ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုစျေးနှုန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့။ ဥပမာ; ကျနော်တို့ 0.86334 ၏စျေးနှုန်းကိုကြည့်ပါလျှင် EUR / GBP - on 0.86349, လက်ျာတော်ဘက် 0.86349 ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ျာဘက်တစ်ဦးကို client မှာမဝယ်မယ်လို့ဘေးထွက်ဖြစ်ပါတယ်။
မသေချာမရေရာပြောင်းလဲမှု, ပြန်၏အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ, သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းထက်မျှော်မှန်းထားပြန်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထိတွေ့အဖြစ်သတ်မှတ်။
Forex အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါ, ကုန်သည်များသူတို့ကုန်သွယ်များအတွက်ဘေးဖယ်ထားအရည်ရန်ပုံငွေထက် ပို. ရန်ပုံငွေများအန္တာရာယ်မသေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စွန့်စားမှုမြို့တော်ကုန်သည်တစ်ဦးငွေကြေးကို pair တစုံအပေါ်ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များသည့်အခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံအတူအဆင်ပြေခံစားရပမာဏကိုရည်ညွှန်းသည်။
ဒါဟာ Forex ဈေးကွက်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာနှင့်အရှင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအန္တရာယ်လျှော့ချအတွက်ကူညီရသောကုန်သွယ်နည်းစနစ်လျှောက်ထားသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါအလားအလာဆုံးရှုံးမှုဖော်ထုတ်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်။
တစ်ဦးအနေအထားတဲ့အခါမှာနေ့ချင်းညချင်းကျင်းပလျက်, client ကိုကသူနဲ့ဆက်စပ်အတိုးနှုန်းပေါ်မူတည်သည်ပွင့်လင်းအနေအထားအပေါ်ပေးဆောင်သို့မဟုတ်ဝင်ငွေစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပေါ်သည်။ FXCC ခြေရင်းငွေကြေးနှင့်တန်ပြန်ငွေကြေးနှင့် client ကိုရဲ့အနေအထား၏ညှနျကွားအကြားအတိုးနှုန်း differential ကိုပေါ် မူတည်. client ရဲ့အကောင့်ငွေကြိုသို့မဟုတ်အကြွေးပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ; ခြေရင်းငွေကြေးများအတွက်နေ့ချင်းညချင်းနှုန်းကိုကောင်တာငွေကြေးထက် ပို. မြင့်မားသည်အတိုင်း client ကိုတာရှည်တဲ့ငွေကြေးတစ်စုံလျှင်, ထို client ကိုနေ့ချင်းညချင်းကျင်းပရာထူးများအတွက်အသေးစားချေးငွေရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အခွအေနတည်ရှိလျှင်, ထို client ကိုအကောင့်အတိုးနှုန်း differential ကိုအတွက်ကွာခြားချက်အဘို့အ debited လိမ့်မည်။ တစ်ဦးကို client ရှည်လျားမြင့်မားအလျှော့ပေးလိုက်လျောငွေကြေး အကယ်. သူတို့အောက်ပိုင်းအလျှော့ပေးလိုက်လျောငွေကြေးအတိုဖြစ်ခြင်းများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်ချင်ပါတယ်နေ့ချင်းညချင်းထက်ပိုမိုမြင့်မားပြန်လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့်ဝင်ငွေနိုင်ဖြစ်ခြင်းမှအကျိုးသင့်ပါတယ်။
ကို Safe Haven ငွေကြေးစနစ်
စျေးကွက်လှိုင်းလေထန်သို့မဟုတ်ပထဝီနိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်ကာလ၌၎င်း၏တန်ဖိုးကိုစောင့်ရှောက်သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ဖို့အဖြစ်မျှော်လင့်ကြောင်းတစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, '' ကို Safe Haven '' အဖြစ်ရည်ညွှန်းတယ်။
ရောင်းမှတ်တိုင်များလက်ရှိဖောက်ကားလေလံစျေးနှုန်းကိုအောက်တွင်ထားရှိမှတ်တိုင်အမိန့်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဈေးကွက်လေလံစျေးနှုန်းမှာ, သို့မဟုတ်ရပ်တန့်စျေးနှုန်းကိုအောက်တွင်သည်အထိ activated ကြသည်မဟုတ်။ တခါဖြစ်ပေါ်, အမိန့်ကိုရပ်တန့်ရောင်းလက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးမှာရောင်းဖို့စျေးကွက်အမိန့်ဖြစ်လာသည်။
က Short ရောင်းချနေ
အဲဒီမှာမြင့်မားတဲ့မတည်ငြိမ်မှုဈေးကွက်ထဲမှာနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်စျေးနှုန်းနှင့်စျေးကွက်အတွက်ရရှိနိုင်ခဲ့နှင့်ကုန်သွယ်မှု execute ရန်အသုံးပြုခဲ့သည့်စျေးနှုန်းအကြားကွာခြားချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ချိန်တွင်၎င်းသည်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ Slippage အမြဲအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ရန်ရှိသည်ဘူး, FXCC clients များနှင့်အတူလည်းစျေးနှုန်းတိုးတက်မှုအဖြစ်လူသိများအပြုသဘော slippage, တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း Interbank Financial ဆက်သွယ်ရေး (ဆွစ်ဖ်) ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းကို။
soft Market က
တစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစျေးကွက်၏လုံလောက်သောအတွေ့အကြုံနှင့်အသိပညာရှိပါတယ်သောအခါသူ / သူမတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများ၏အန္တရာယ်များကိုအကဲဖြတ်ရန်ရန်မျှော်လင့်နေသည်။
ထရေးဒင်း, ဥပမာ, နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုမှန်းဆလျက်ရှိ၏ FX ပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်သူတို့သည်အတွေ့အကြုံကနေအကျိုးမပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မရှိပါ။ clients ကုန်သွယ် FX အလွန်အမင်းမှန်းဆအောင်, သူတို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုသိုက်ရဲ့ margin ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်သူများသည်ပျောက်ဆုံးသွားလျှင် client ကိုရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့, ဒါမှမဟုတ်သူတို့မိသားစုရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့မပြောင်းမယ်လို့ပမာဏအဖြစ်သတ်မှတ်အန္တရာယ်မြို့တော်ဟုယူဆသောသာအန္တရာယ်မြို့တော်သင့်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့်ခဏတာဖြစ်သည့်စျေးနှုန်းအရေးယူအတွက်အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဆောင်သောလှုပ်ရှားမှုများကိုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Forex ဈေးကွက်ထဲမှာတစ်ခုဖြစ်ပျက်မှု။
အစက်အပြောက် Market က
အစက်အပြောက်စျေးကွက်ချက်ချင်းကုန်သွယ်ကြသည်နှင့်အစက်အပြောက် Forex ဈေးကွက်အတွက်သင်တန်းသားများကိုသူတို့အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာငွေကြေးလက်ခံရရှိသို့မဟုတ်မကယ်မနှုတ်ဘူးအဖြစ်အမိန့်, ချက်ချင်းအခြေချနေထိုင်ကြသည်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာအဘို့အယန္တရားများအတွက်တည်ဆောက်လေပြီ။
အစက်အပြောက်စျေးနှုန်း / နှုန်းသည်
ဒါဟာတန်ဖိုးနေ့စွဲကုန်သွယ်ရေးနေ့စွဲကနေရှေ့ဆက်2စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်အတွင်းသတ်မှတ်ထားသည်အဘယ်မှာရှိနိုင်ငံခြားငွေအရောင်းအများ၏အခြေချများအတွက်စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
ချက်ချင်းအမိန့် (စျေးနှုန်းကိုမေး) နှင့်ငွေကြေးအားလုံးအတှကျချက်ချင်းရောင်းချခြင်း (လေလံစျေးနှုန်း) အတွက်ပေးထားသည့်စျေးနှုန်းများအကြားကွာခြားချက်။
အဆိုပါအခွအေနေသည့်အခါမရှိဖွင့်လှစ်အနေအထားနှင့် client ကိုရဲ့ဝယ်ယူမှုနှင့်အရောင်းချိန်ခွင်လျှာ၌ရှိကြ၏။
Forex ကုန်သွယ်အသုံးအနှုန်းများအတွက်တစ်ဦးစံတွေအများကြီးတစ်ဦး Forex ကုန်သွယ်ငွေကြေးတစ်စုံအတွက်အခြေစိုက်စခန်းငွေကြေး၏ 100,000 ယူနစ်ဖို့ညီမျှသည်။ Mini-တွေအများကြီးနဲ့ micro-တွေအများကြီး: တစ်ဦးစံအများကြီးအခြားနှစ်ခုရှိပါတယ်, သုံးယောက်လေ့လူသိများအများကြီးအရွယ်အစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကစံတွေအများကြီးတစ် Mini-တွေအများကြီး 100,000 တစ် Micro-တွေအများကြီးမဆိုငွေကြေး၏ 10,000 ယူနစ်ကိုကိုယ်စားပြုကိုယ်စားပြုတစ်ဦးငွေကြေးကို pair တစုံ၏ 1,000 ယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ စံတွေအများကြီးများအတွက်တစ်ဦးကတဦးတည်း-PIP လှုပ်ရှားမှုကိုတစ်ဦး $ 10 ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူကိုက်ညီ။
ပိုးသတ်တစ်ဦးဗဟိုဘဏ်ကပြည်တွင်းပိုက်ဆံထောက်ပံ့ရေးအပေါ်မြို့တော်စီးနှင့်စီးထွက်၏သက်ရောက်မှုကန့်သတ်ခွ, ငွေကြေးဆိုင်ရာမူဝါဒအမျိုးအစားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ပိုးသတ်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများသက်ရောက်မှု offsetting တစ်ဗဟိုဘဏ်ကနေဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများဝယ်ယူသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းပါဝငျသညျ။ အဆိုပါပိုးသတ်ဖြစ်စဉ်ကိုအခြားတစ်ဦးပြည်တွင်းငွေကြေးဆွေမျိုးများ၏တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ပါကနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစျေးကွက်အတွက်အစပျိုးပါတယ်။
ငွေကြေးတစ်စုံ GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမဟုတ်ရင်ကေဘယ်လ်အဖြစ်လူသိများဗြိတိန်ပေါင်။
အဆိုပါ Stochastic (Stoch)0နှင့် 100 အကြားတစ်ဦးရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်စျေးနှုန်းပုံမှန်ရန်ကြိုးစားသည်။ stochastic လိုင်းများနှင့်အတူနှစ်ဦးလိုင်းများ, အစာရှောင်ခြင်းနှင့်နှေးကွေးသော stochastic လိုင်းများကြံစည်နေကြသည်။ ဒါဟာခေတ်ရေစီးကြောင်း၏အစွမ်းသတ္တိကို Chow မှကုန်သည်များကအသုံးပြုမယ့်ပေါ်ပြူလာလှိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာစျေးနှုန်း pips တစ်အချို့ငွေပမာဏအားဖြင့်အနေအထားကို၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်လှုံ့ဆော်ပေးလျှင်တစ်ဦးအနေအထားမှထွက်ပိတ်လိုက်ဖို့ client ကိုအားဖြင့်နေရာချတိကျတဲ့အမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးအခြေအနေများတွင်အရှုံးအမိန့်အဖြစ်မကြာမီစျေးကွက်ရောက်ရှိအဖြစ်ကွပ်မျက်ခံရနေကြသည်ကိုရပ်တန့်ပါသို့မဟုတ် client ကိုရဲ့ set ကိုရပ်တန့်အဆင့်ကိုတဆင့်တတ်၏။ ထုတ်ပေးပြီးတာနဲ့ရပ်တန့်သောစျေးနှုန်းရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်မှီ, ရပ်တန့်နိုင်ရန်ဆိုင်းငံ့ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အမိန့်, (အရှုံးကိုရပ်တန့်) တစ်ဦးအနေအထားမှထွက်ပိတ်ဖို့ရန်အနေအထား reverse ဖို့, ဒါမှမဟုတ်အသစ်တခုအနေအထားဖွင့်လှစ်ဖို့အသုံးပြုစေခြင်းငှါရပ်တန့်။ မှတ်တိုင်အမိန့်များ၏အသုံးအများဆုံးအသုံးပြုမှု (ဆုံးရှုံးမှုကန့်သတ်ခြင်းသို့မဟုတ် Unreal အကျိုးအမြတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်) ရှိပြီးသားအနေအထားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ စျေးကွက်တာမျိုး, သို့မဟုတ်ရပ်တန့်စျေးနှုန်းကတဆင့်ဝင်ပြီးတာနဲ့အမိန့် activated (အစပျိုး) နှင့် FXCC လာမည့်ရရှိနိုင်ပါစျေးနှုန်းမှာအမိန့်စီရင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အမိန့်ဟာရပ်တန့်စျေးနှုန်းမှာကွပ်မျက်အာမမခံနိုင်ပါဘူးရပ်တန့်။ အသံအတိုးအကျယ်၏မတည်ငြိမ်မှုများနှင့်မရှိခြင်းအပါအဝင် Market ကအခြေအနေများအမိန့်ထက်ကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းမှာကွပ်မျက်ခံရခံရဖို့တစ်မှတ်တိုင်အမိန့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါက client ကိုရပ်တန့်အရှုံးအမိန့်မြှင့်လုပ်ဆောင်တဲ့စျေးနှုန်းထဲသို့ဝင်ရှိရာစျေးနှုန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
တစ်ဦးစီးပွားရေးမှာအတွင်းအလုပ်လက်မဲ့ရှည်တည်တံ့ပုံစံလည်းမရှိသောအခါ, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအလုပ်လက်မဲ့အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာ, ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အစိုးရမူဝါဒအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအချက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေကာစီးပွားရေးအတွက်အခြေခံကျသောအပြောင်းအလဲများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
မောင်း / လှည်း
FXCC တစ် client ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာထက်အခြားအခြားငွေကြေးအတွက် P ကို ​​/ L ကိုလာတဲ့အခါ, P / L ကိုပြောင်းလဲခြင်းမှုနှုန်းအဖြစ်လူသိများအချိန်တွင်ရေပန်းစားတစ်ဦးလဲလှယ်မှုနှုန်း (အနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာသို့တစ်ခုချင်းစီကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့၏အနီးကပ်မှာပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည် ) ။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုသိမ်းကျုံးဟုခေါ်သည်။ အဆိုပါ P ကို ​​/ L ကိုသုတ်သင်ဖြစ်ပါတယ်မှီ, client ကိုရဲ့အကောင့်တန်ဖိုးကိုတစ်ဦးလဲလှယ်သည့်အမြတ်အစွန်းအဘို့အမှုနှုန်းနှင့်အရှုံးများနှင့်ငွေကြေးအပြောင်းအလဲများကဲ့သို့အနည်းငယ် (တက်သို့မဟုတ်ဆင်း) အတက်အကျပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ; client ကိုဂျပန်ယန်းငွေအတွက်အမြတ်အစွန်းရှိပါတယ်လျှင်အနေအထားတံခါးပိတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်ယန်း၏တန်ဖိုးမြင့်တက်လျှင်ပေမယ့်အမြတ်အစွန်းဒေါ်လာသို့မျောခင်, အကောင့်တန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါပြောင်းလဲမှုထို့ကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပါသည်, သာအမြတ်အစွန်း / ဆုံးရှုံးမှုပမာဏပေါ်သည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းကမ္ဘာ့ဖလား-ကျယ်ပြန့်များအတွက် Interbank ဆက်သွယ်ရေးအများဆုံးနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာအခြေချဘို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအီလက်ထရောနစ်ကွန်ယက်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ဘယ်ဂျီယံအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းအတည်ပြုခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုငွေကြေး codes တွေကိုများ၏စံချိန်စံညွှန်း (ဆိုလိုသည်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ = အမေရိကန်ဒေါ်လာ, EUR အဆိုပါယူရို, JPY = ဂျပန်ယန်း =) အတွက်တာဝန်ရှိသည်
ဤသည်ကိုမကြာခဏ '' တျအပွောငျးအလဲ '' ဟုခေါ်ကြသည်ထားတဲ့စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲကနေအကျိုးတစ်ခုကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက် (ရက်ပေါင်းများစွာမှ) တဦးတည်းအနေဖြင့်ပွင့်လင်းတဲ့အနေအထားကိုင်ဆောင်ကာမှန်းဆကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ၏ version တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဆွစ်ဖရန့်, CHF များအတွက် Market ကဘန်းစကား။
ဒါဟာစျေးကွက်စျေးနှုန်းများလိုချင်သောအဆင့်ကိုရောက်ရှိတခါ, အမိန့်ကိုပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မည်တဲ့ Pre-defined စျေးနှုန်းနှင့်အတူ client ကိုအားဖြင့်နေရာချထားတဲ့အမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။ အမိန့်သဘောပေါက်နေသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပြုလုပ်ပေးထားသောကုန်သွယ်မှုများအတွက်အမြတ်အစွန်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်။
ထူးအိမ်သင် Market က
မနက်ဖြန်လာမယ့်ရာထူးပိတ်ပွဲမှုနှုန်းပြီးတော့ re-ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်အောက်ပါနေ့ရက်ကိုမှာတိကျတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့၌ထွက်ပိတ်လိုက်ပါဝငျသညျ။ အဆိုပါပေးပို့အရောင်းအဝယ်နေ့စွဲပြီးနောက်နှစ်ဦးကို (2) ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငွေကြေးမဆိုအမှန်တကယ်ပေးပို့ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ငွေကြေး၏တစ်ပြိုင်တည်းပါဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အခြားပါတီများနှင့်အတူမည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများ, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်တူရိယာများ၏ဝယ်သို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်း။ Forex ကုန်သွယ်နိုင်ငံခြားငွေကြေးများ၏နှုန်းသည်အတွက်အပြောင်းအလဲအပေါ်ထင်ကြေးအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ထရေးဒင်းစာသင်ခုံကိုလည်း '' ဆက်ဆံစာသင်ခုံ '' အဖြစ်လူသိများကြသည်။ ရောင်းစျေးများနှင့်ဝယ်အရောင်းအရပျကို ယူ. သူတို့အမိန့်၏ချက်ချင်းကွပ်မျက်နှင့်အတူကုန်သည်များပေးနိုငျဘဏ်များ, ဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီများ, စသည်တို့ကိုတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာဒါဟာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကို client ဖောက်သည်ရဲ့ကိုယ်စားအပေါ်တစ်ဦးငွေပေးငွေယူ execute ဖို့အမိန့်ပေးနိုင်ပါသည်ရှိရာတစ်ဦးကဆော့ဖ်ဝဲ application ။ FXCC-MT4 (MetaTrader 4) ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်း၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ရပ်တန့်သည့်အကျိုးအမြတ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အသုံးပြုသည်ကပ်တွယ်မှုကိုကုန်သွယ်မှုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးစျေးနှုန်းအလိုရှိသောဦးတည်ရွေ့လျားလျက်ရှိသည်အဖြစ်များအတွက်အမြတ် (အမြတ်) ၏ဆက်လက်ခွင့်ပြုထိန်းသိမ်းရန်ကတိကျတဲ့ကုန်သွယ်မှုကနေဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောငွေပမာဏကိုကားသတ်မှတ်ထားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းအပေါ်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။
ကုမ္ပဏီများသည်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုအတွက်ပါဝင်ကြသည်တဲ့အခါသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နေသောအန္တရာယ် entity ဘဏ္ဍာရေးကတိကဝတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးနောက်ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုအမှု၌, ငွေပေးငွေယူထိတွေ့မှုဖြစ်ပါတယ်။
စျေးကွက်၏ညှနျကွားသို့မဟုတ်အများအားဖြင့်စကားကို related စျေးနှုန်း: (အထိ) ", အီရန် bearish, ဒါမှမဟုတ်ဘေးတိုက်" နှင့်ကာလတို, ရေရှည်သို့မဟုတ်ချက်ချင်းခေတ်ရေစီးကြောင်းနိုင်ပါတယ်။
ဤသည်ကိုလည်း linear ဆုတ်ယုတ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (တစ်ဦးညွှန်ပြချက်) ၏ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ နိမ့်ဆုံး, အမြင့်ဆုံး, ဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပွဲနှင့်အဖွင့်စျေးနှုန်းများ: Trend လိုင်းများအတွက်ကိုဖြတ်ပြီးအရှိဆုံးသင့်လျော်သောလိုင်းကြံစည်နေဖြင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့ကိန်းဂဏန်း tools တွေနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Unreal P ကို ​​/ L ကို
ဒါဟာလက်ရှိငွေလဲနှုန်းမှာပေးထားအစစ်အမှန်အချိန်အမြတ်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, client ကိုတိကျတဲ့ငွေကြေးတစ်စုံများအတွက် log သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်သူ / သူမသည်လေလံစျေးနှုန်းမှာရောင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်နှင့်ပေးထားသောအနေအထားပိတ်ပါသည်သည်အထိ Unreal P ကို ​​/ L ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ပြီးတာနဲ့တံခါးပိတ်, P / L ကိုသိုက်ပမာဏပေါ်သစ်ကိုငွေသားရယူနိုင်ဖို့အတွက်သိုက်အပေါ် left ပမာဏအနေဖြင့်ထည့်သွင်းသို့မဟုတ်နုတ်ယူလိမ့်မည်ဖြစ်စေ။
ဒေါ်လာစျေးအညွှန်းကိန်း (USDX) ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အရေးပါသောကုန်သွယ်မိတ်ဖက်များ၏ငွေကြေး၏တောင်း၏တန်ဖိုးကိုနှိုင်းယှဉ်အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာ၏တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာသည်။ ယူရိုငွေ, ဂျပန်ယန်း, ကနေဒါဒေါ်လာ, ဗြိတိန်ပေါင်, ဆွီဒင်ခရိုနာနှင့်ဆွစ်ဖရန်: လောလောဆယ်ဒီအညွှန်းကိန်းခြောက်အဓိကကမ္ဘာတွင်ငွေကြေးများ၏ငွေလဲလှယ်နှုန်းတွက်အားဖြင့်တွက်ချက်သည်။ ယူရိုခန့် 58% နှင့်အတူယန်းနောကျတွက်ဆတန်ဖိုး 14% ဖွဲ့စည်းရန်အတွက်အညွှန်းကိန်းအတွက်ဒေါ်လာသာရှိပြီးပြည်ပမှအများဆုံးအလေးချိန်, ရှိပါတယ်။ အဆိုပါအညွှန်းကိန်း 1973 တစ်ဦးအခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူ 100 အတွက်စတင် ထိုအချိန်မှစ. တန်ဖိုးများကိုဒီအခြေစိုက်စခန်းမှဆွေမျိုးဖြစ်ကြသည်။
ဒါဟာတစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်တဲ့ signal ကိုအဖြစ်ကိုကြည့်ရှုသည်အဘယ်မှာရှိနည်းပညာဆိုင်ရာသုံးသပ်သူများကရည်ညွှန်းနေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာဘဏ္ဍာရေးငွေပေးငွေယူ၏ counterparts တွေကိုအကြားငွေပေးချေ၏လဲလှယ်ရာအရပ်ကိုကြာလာသောအခါရက်စွဲဖြစ်ပါတယ်။ အစက်အပြောက်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းများအတွက်ရင့်ကျက်သည့်ရက်စွဲပုံမှန်အနေအထားဖွင့်လှစ်သောအခါကနေနှစ်ခု (2) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။
VIX အဆိုပါ CBOE မတည်ငြိမ်သောအညွှန်းကိန်း, SPX အညွှန်းကိန်းရွေးချယ်စရာ၏အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောမတည်ငြိမ်မှု၏လူကြိုက်များအတိုင်းအတာတစ်ခု ticker သင်္ကေတဖြစ်၏ အဆိုပါ VIX ချီကာဂိုဘုတ်အဖွဲ့ Options ကိုချိန်း (CBOE) ကတွက်ချက်ထားသည်။ အဆိုပါ VIX စာဖတ်ခြင်းမြင့်မားသည်လျှင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ကုန်သည်များအစဉ်အလာကုန်သွယ်၏အန္တရာယ်ခြီးမွှောကျကြောင်းယုံကြည်; အဓိကရှယ်ယာစျေးကွက်တစ်ခုအကူးအပြောင်းကာလ၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ VIX အဆိုပါ SPX အတွက်နှစ်ပတ်လည်လှုပ်ရှားမှုတစ်ချိန်သုံးဆယ်နေ့ကစံသွေဖည်နှင့်ငါတို့ကိုပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, 20% တစ်စာဖတ်ခြင်းလာမည့်တဆယ်နှစ်လုံးကိုလကြာကာလအတွင်းတက်သို့မဟုတ်ဆင်းတစ် 20% ပြောင်းရွှေ့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။
တူညီသောတူရိယာ၏ပြန်အကြားစံသွေဖည်သို့မဟုတ်ကှဲလှဲ အသုံးပြု. တိုင်းတာနိုင်သည့်စျေးနှုန်းအတက်အကျ၏အတိုင်းအတာအဖြစ်သတ်မှတ်။
တစ်ဦးအထူးသ၏ကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှု၏စုစုပေါင်းပမာဏ၏တွက်ချက်မှု: ရှယ်ယာ, ငွေကြေးတစ်စုံ, ကုန်စည်, ဒါမှမဟုတ်အညွှန်းကိန်း။ တခါတရံလည်းတစ်နေ့တာအတွင်းကုန်သွယ်စာချုပ်များ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါတယ်။
တစ်ဦး "virtual private server" လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ ကုန်သည်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် switched ရှိသည်ဖို့မလိုဘဲလျှော့အောင်းနေချိန်မှာ 24 /5ကုန်သွယ်မှုမှသူတို့ကိုဖွင့်, အဝေးမှသူတို့ရဲ့ကွက် load နှင့်လည်ပတ်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဟာဝေးလံခေါင်သီ server ကိုမှ dedicated access ကို။ FXCC မှတဆင့်အဆိုပါဝန်ဆောင်မှု BeeksFX ပေးထားပါသည်။
ဒီပုံစံလက်ရှိတွင်သပ်အတွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တစ်လမ်းကြောင်းသစ်၏ပြောင်းပြန်အချက်ပြလိုက်ခြင်း။ ပြင်ဆင်ပြီးသုံးထောက်ခံမှုနှင့်ခုခံရေးလမ်းကြောင်းသစ်လိုင်းများရှိခြင်း, တြိဂံပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဆင်တူဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်ဇယားပုံစံတစ်ဦးကျဉ်းစျေးနှုန်းအကွာအဝေးကိုပြသပေးသောရေရှည်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာလက္ကားကုန်စည်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးခြင်းတောင်းနှင့်စီးပွားရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးကဏ္ဍတွင်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုတစ်ခုတိုင်းတာခြင်း၏စျေးနှုန်းသည်။ မကြာခဏ 60 ရက် 90 အားဖြင့်စားသုံးသူစျေးနှုန်းညွှန်းကိန်းစေပါတယ်။ အစားအစာနှင့်စက်မှုဇုန်စျေးနှုန်းများမကြာခဏသီးခြားစီစာရင်းနေကြသည်။
ငွေကြေးရဲ့ဘဏ္ဍာရေးစင်တာအတွက်ဘဏ်များ, ထိုကဲ့သို့သောကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောနေ့ရက်အဖြစ်, ဥပမာ, US မှာဘဏ်အားလပ်ရက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဖွင့်သည့်အခါတစ်ဦးကတစ်ရက်ကဆိုအမေရိကန်ဒေါ်လာအခြေပြုကိုးကားတစ်စုံတစ်ဦးအလုပ်လုပ်နေနေ့ကမဟုတ်ပါဟုဆိုလိုပေသည်။
ဒါဟာအဘယ်သူ၏ပုဂ္ဂလိကအရင်းအနှီးမရရှိနိုင်ဘယ်မှာချေးငွေများအောင်နေဖြင့်အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုသည့် IMF ကအဖွဲ့ဝင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းကာနိုင်ငံတကာငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်သွယ်ရေး၏ grantor တစ်ခုသို့မဟုတ်ငွေကြေးအနေအထားများရောင်းချသူအဖြစ်လူသိများ။
တစ်နှစ်တာ-on-တစ်နှစ်။ နှစ်စဉ် / နှစ်စဉ်ကာလအတွင်းညွှန်းကိန်းများတွင်ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလဲမှုတွက်ချက်အတှကျအသုံးပွုအတိုကောက်။